သာယာသောဘဝ – Grab Love Story
ဘဝဆိုတဲ့အရာကြီးသည်ချိုမြိန်မွုထက်ခါးသီးမွုကိုသာပို၍ ပေးစွမ်းတတ်ပါသည်။ ဘဝကြီးဟာ အကြမ်း တွေချည်း ဖြစ်နေချိန်မှာ ကိုယ်ကနုနေလို့ ဘယ်ရတော့မလဲ။ ကိုယ်တိုင်လည်း လိုက်ကြမ်းရတော့မပေါ့။ ဒါကို ပတ်ဝန်းကျင်က ရိုင်းတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ရိုင်းတယ်ဆိုတော့လည်း ရိုင်းတယ်ပေါ့ တချိန်က ကိုယ်ခံနေရချိန် တုန်းကရော သူတို့ဘာများကူညီခဲ့လို့လဲ။ လူလောကထဲ မရောက်ခင်မှာပင်အဖေသေပြီး ယောင်္ကျားမရှိရင်မနေတတ်တဲ့အမေက နောက်ယောင်္ကျား ယူချိန်တွင်တော့ အေးမအသက်မှာ ၂ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးသည်။ အေးမအမေသည်သိပ်ကိုပွေရွုပ်သော မိန်းမ ဖြစ်သည်။ ယောင်္ကျားတကာနှင့် ညစဉ်ပျော်ပါးနေတတ်သည်။ အသက်ကလည်းငယ်ငယ်မို့ ကလပ်တတ်သည်၊ ဖဲဝိုင်းထိုင်သည်။ သူမ၏ နောက်ယောင်္ကျားဖြစ်သော ဦးဖိုးမောင်ကိုပင်ရှိသည်မထင်သူမလုပ်ချင်ရာလုပ်သည်။ အေးမလေးဘဝမှာလည်း ကံမကောင်းရှာပေ၊ အမေ့၏ဂရုစိုက်မွုကိုမရပဲ ပထွေး၏လက်ပေါ်တွင်သာ အရွယ် ရောက်လာခဲ့ရသည်။
ပထွေးသည်လည်း သူမအမေကိုမနိုင်သဖြင့် သူမကိုသာမဲနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အေးမသည်ပထွေးဦးဖိုးမောင်ကို အမေထက်ပင်ချစ်ကြောက်ရိုသေဖြစ်နေပါသည်။ ချစ်ကြောက်ရိုသေ ဆိုရာတွင် လည်း ကြောက်တာက ထိပ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ချစ်တာကတော့ဘာမှန်းကိုမသိပေ။ အေးမငါးတန်းတတ်ချိန်မှာတော့ အေးမအမေသည် ဦးဖိုးမောင်မဟုတ်သည့် အခြားတယောက်နှင့် ကား လျှောက်စီးရင်း အက်စီးဒန့်ဖြစ်ကာ ဘဝတဝက်ချုပ်ငြိမ်း သွားပါတော့သည်။ ဘဝတဝက်ဟု ဆိုရခြင်းမှာ အသက် မသေဘဲ အောက်ပိုင်း လွုပ်မရတော့ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အေးမအမေကို မကျေနပ်သော ဦးဖိုးမောင်သည် အေးမ အမေအောက်ပိုင်းသေပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပင်သူ့နောက်မိန်းမကိုအိမ်ခေါ်လာပါတော့သည်။ အေးမအမေမှာ လဲအောက်ပိုင်းသေနေသည်မို့သူနဲ့ရန်ဖြစ်လျှင်အရွုံးချည်းသာဖြစ်သည်။ ဦးဖိုးအောင်သည်အေးမအမေ့ကို အရှေ့ထား၍ သူ့နောက်မိန်းမနှင့်လိုးပြသည်။ အစပိုင်းတွင်အေးမမသိ သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်တော့ အကြောင်းအခွင့်တိုက်ဆိုင်စွာ ထိုကိစ္စကို အေးမသိလိုက်ရပါသည်။ အေးမ ရတန်း တတ်ချိန်တွင်တော့ အေးမကျောင်းသွားနေသော တနေ့တွင်အေးမအမေသည်အပေါ်ထပ်လှေကားထစ် မှပြုတ်ကျကာ သေဆုံးသွားပါတော့သည်။ အေးမကျောင်းပြန်လာချိန်တွင်တော့အသက်မဲ့နေသော အမေ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာ အေးမတွေ့ရပါတော့သည်။ အေးမအမေမည်သို့မည်ပုံသေသည်ကိုတော့ အိမ်ဖော်ဒေါ်စော၏ပြောချက်အရ အမေနှင့်ဦးဖိုးအောင်တို့စကားများ ကြပြီး ဦးဖိုးအောင်အောက်ထပ်ဆင်းသွားသည်ကို နောက်မှအတင်းလိုက်ရင်း ပြုတ်ကျသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရပါ သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အေးမဘဝသည်လည်း ပြောင်းလဲမွုများ စတင်ခဲ့တော့သည်။ “ ဟဲ့အေးမခေါ်နေတာ မကြားဘူးလားးးးးး ” “ အေးမ ငါခေါ်နေတယ်လေ မြန်မြန်လာခဲ့စမ်း ” ရေချိုးခန်းတွင်အဝတ်များလျှော်နေရာမှ အိမ်ရှေ့မှ အော်ခေါ်နေသော ဒေါ်လှလွန်းသူ၏ ခေါ်သံကြောင့် အေးမ အပြေးအလွား အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းသို့သွားလိုက်ပါသည်။
“ ညည်းကိုငါဒီလောက်ခေါ်နေတာတောင်မကြားဘူးလား ” အပြောနှင့်အတူဒေါ်လှလွန်းသူ၏လက်များသည်အေးမ၏ဗိုက်ခေါက်ကိုအတင်းလိမ်ဆွဲလိုက်ပါတော့သည်။ အေးမသည်လည်းအပျိုးကျိုးနေသူတယောက်မို့ဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲခြင်းကိုပင်ခံလိုက်ပြီး တခွန်းမျှပြန်မပြောပါ။ “ ဒီအမှိုက်တွေကိုသိမ်း ” သူမ ရုပ်ရုင်ကြည့်ရင်း စားထားသည့် နေကြာစေ့အခွံများနှင့် ပျံ့ကျဲနေသော ကလေးကစားစရာများကို လက်ညှိုးထိုး၍ပြောပါသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့အေးမအနားမှသူမထသွားပါသည်။ အေးမသည်ဒေါ်လှလွန်းသူ ခိုင်းသည့်အတိုင်း အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းနေပါသည်။ အမှိုက်များသည်တော်တော်ဖွထားခြင်း ဖြစ်သဖြင့်အချိန် အတော်ကြာသည်အထိရှင်း၍မပြီးနိုင်ခဲ့ပါ။ “ အေးမ ဒီကိုအမြန်လာခဲ့စမ်း” “ အေးမ…. ” နောက်ဖေးမှဒေါ်လှလွန်းသူ၏ အသံဖြစ်သည်။ အေးမလုပ်လက်စများကိုရပ်နား၍ အလျင်အမြန်သွားလိုက် ပါသည်။ “ ဒီမှာကြည့်စမ်း ” ဟုဆိုကာ အေးမဆံပင်ကိုဆွဲ၍ အေးမလက်စမသတ်ခဲ့မိသောအဝတ်ပုံကိုထိုးပြပါသည်။ “ ညည်းဒါတွေကိုဆက်မလုပ်ဘဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ ” “ သမီး ဒေါ်လေးခိုင်းတဲ့အတိုင်း အမှိုက်တွေကိုရှင်းနေပါတယ်” “ အဲ့အမှိုက်လေးနည်းနည်းကိုရှင်းတာ အခုထိမပြီးသေးဘူး ” “ ညည်းဟာလေ ဘာလုပ်ခိုင်းလုပ်ခိုင်း ကြာကိုကြာတယ်၊ အချိုးကိုမပြေဘူး၊ သွားမြန်မြန်သွားရှင်း ” အေးမလည်း အိမ်ရှေ့ခန်းသို့ပြန်လာ၍ အမှိုက်များကို အလျင်အမြန်ရှင်းပါသည်။ ဒေါ်လှလွန်းသူကတော့ ရေချိုးခန်းထဲဝင်၍ ရေချိုးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ အေးမတို့အိမ်သည်နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေးဖြစ်ပြီး ခြံဝန်းမှာအကျယ်ကြီး မဟုတ်သော်လည်း မကျဉ်းလှပေ။
အိမ်အပေါ်ထပ်တွင်အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းနှင့်ဘုရားစင်ရှိပြီး နောက်ထပ်တွင်တော့ ဧည့်ခန်းနှင့်မီးဖိုခန်းရှိပါသည်။ အိမ်တွင်အိမ်သာနှင့်ရေချိုးခန်းတခုသာ မီးဖိုခန်းနှင့်တွဲလျက်ရှိနေပါသည်။ အေးမလည်း အမှိုက်များကိုရှင်းပြီးပြီမို့အဝတ်လျှော်စရာများရှိရာ ရေချိုးခန်းသို့ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ သို့သည့် တိုင်ဒေါ်လှလွန်းသူသည်ရေချိုးနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ရေချိုးနေဆဲဖြစ်သော်လည်း အေးမရောက်ချိန်တွင်ရေသံကို မကြားရသဖြင့်ဒေါ်လှလွန်းသူရေချိုးနေသည်ကိုမသိဘဲအေးမသည်ရေချိုးခန်းတံခါးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပါသည်။ ဆွဲဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ရေချိုးခန်းထဲတွင် ကိုယ်လုံးတီးနှင့် ရေချိုးနေသော ဒေါ်လှလွန်းသူကို တွေ့လိုက်ရ ပါသည်။ မထင်မှတ်ထားသည်မို့ အေးမအနည်းငယ်ကြောင်သွားပြီး ခနလောက်ရပ်ကြည့်နေမိပါသည်။ ပြီးနောက် တံခါးကိုပြန်ဆွဲပိတ်လိုက်ပါသည်။ သို့သော်တံခါးမပိတ်သွားခဲ့ပါ။ ဒေါ်လှလွန်းသူ၏လက်က ပိတ်သွားမည့်တံခါးကို ဖမ်းတားထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ အထဲဝင်ခဲ့စမ်းးးးးး ” ဒေါ်လှလွန်းသူ၏ အမိန့်ပေးသံကြောင့် အေးမတယောက် မဝင်ချင်ဘဲနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက်ဒေါ်လှလွန်းသူက တံခါးကိုပိတ်၍ လော့ချလိုက်ပါသည်။ အေးမ ထိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကို ဖြစ်ဖူးပါသည်။ အချိန်ကတော့အေးမအမေသေပြီး နှစ်လအကြာတွင်ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ကျော်ခန့်က…….. အေးမသည်အားကိုစရာဟူ၍ မရှိတော့ပေ။ အမေရှိချိန်က အားမကိုးရသော်လည်း အမေရှိသည်ဟူသော အသိက အေးမကို အားရှိစေခဲ့သည်။
အခုအချိန်တွင်တော့ ဦးဖိုးအောင်သည်သာ အေးမ၏အဓိကအုပ်ထိန်းသူ ဖြစ်လာပြီဖြစ်သည်။အေးမသည်နဂိုကပင်ဦးဖိုးအောင်ကိုကြောက်ရသူမို့ထွေထွေထူးထူးတော့မပြောင်းလဲသွားပေ။ ပြောင်းလဲသွားသည်ကတော့ နဂိုကသိပ်မကြောက်ခဲ့ရသော ဒေါ်လှလွန်းသူကို အခုအချိန်တွင် ပိုမိုကြောက်ရွံ့ နေရပြီဖြစ်သည်။ အေးမအမေသေပြီး နှစ်လအကြာတရက်တွင် အေးမအောက်ထပ်သို့ ရေချိုးဆင်းချိန် တွင်ဖြစ်သည်။ ထဘီ ရင်လျားနှင့် ပခုံးအပေါ်တွင် မျက်နှာသုတ်ပဝါကိုတင်ကာ ရေချိုးခန်းရှိရာသို့ အေးမလာခဲ့ပါသည်။ ရေချိုး ခန်းတံခါးက ပိတ်ထားသော်လည်း အထဲတွင်ဘာသံမျှမကြားရသဖြင့်လူမရှိလောက်ဟုထင်ကာ အေးမ ရေချိုးခန်း တံခါးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပါသည်။ ရေချိုးခန်းတံခါး ပွင့်သွားချိန်တွင်တော့ ငုတ်တုတ်ထိုင်၍ ခြေထောက်ကို ချေးတွန်းနေသော ဦးဖိုးအောင်ကို အေးမတွေလိုက်ရပါသည်။ ရေချိုးနေသည်မို့ဦးဖိုးအောင်ကိုယ်ပေါ်တွင်အဝတ်မရှိဘဲ လုံးတီးဖြစ်နေချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်ရနေပြီဖြစ်သောအရွယ်မို့ တံခါးကိုချက်ချင်း ပြန်ပိတ်လိုက်ပါသည်။ တံခါးသည်လည်း ပိတ်သွားပါသည်။ သို့သော်ချက်ချင်းဆိုသလိုတံခါးပြန်ပွင့်လာပြီး ရေချိုးခန်းထဲမှာရှိသော ဦးဖိုးအောင်သည်အေးမကိုချုပ်၍ ရေချိုးခန်း အတွင်းသို့ဆွဲခေါ်သွားပါသည်။ ဖျတ်ခနဲမို့ ရုန်းချိန်ပင်မရလိုက်ဘဲ အေးမရေချိုးခန်းအတွင်းသို့ ရောက်သွားပါသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ဦးဖိုးအောင်သည်ထင်မှတ်မထားသော အပြုအမူများကို စတင်ပြုမူပါတော့သည်။ အေးမရုန်းပါသည်၊ သို့သော်ကြာ ကြာ မရုန်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
အေးမရုန်းလိုက်သည်နှင့်ဦးဖိုးအောင်၏ လက်ဝါးက အေးမ၏တင်ပါးပေါ်သို့အရှိန်ပြင်းစွာ ကျလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အေးမ မရုန်းနိုင်တော့ဘဲ ဦးဖိုးအောင်ပြုသမျှ ဖြစ်ရပါတော့သည်။ ရင်လျားထားသော ထဘီကိုဆွဲချ၍ အောက်သို့ကွင်းလုံးကျစေပြီးနောက်အေးမအား မတ်တပ်ရပ်အတိုင်း ထား၍အေးမ၏သေးငယ်လှသောအဖုတ်လေးကိုသူ့၏လက်ဝါးကြီးနှင့်အုပ်လိုက်ပါသည်။လက်ဝါးဖြင့်ကြမ်းတမ်းစွာ တဖျင်းဖျင်းပွတ်မွုကြောင့် အေးမအဖုတ်မှ သေးများပန်းထွက်လာပါသည်။ သေးများထွက်ကျသွားပြီး နောက်မှာ တော့ဦးဖိုးအောင်သည်သူ၏လက်ခလယ်ကိုအေးမအဖုတ်ထဲသို့ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးထည့်ပါသည်။ တခါမှမနာကျင်ဖူးသော နာကျင်မွုကို အေးမတယောက်ခံစားလိုက်ရပါသည်။ ဦးဖိုးအောင်၏ လက်ခလယ် သည်အေးမအဖုတ်အတွင်းသို့နှစ်ဆစ်လောက်ဝင်နေပြီဖြစ်သည်။နောက်တဆစ်ဝင်ရန်ကိုလည်းဦးဖိုးအောင်သည် ဆက်လက်ထိုးသွင်းနေပါသည်။ ခဏအကြာတွင်တော့ကျန်တဆစ်သည်လည်း ဝင်သွားပါတော့သည်။ လက်ခလယ်တခုလုံး ဝင်သွားချိန်တွင်တော့ ဦးဖိုးမောင်သည် မွေနှောက်ပါတော့သည်။ သူစိတ်ကျေနပ် လောက်အောင်မွေနှောက်ပြီး၍ လက်ချောင်းကို ပြန်ထုတ်လိုက်ချိန်တွင်တော့ပျစ်ပျစ်အရည်ကျဲများ၊ သွေးစများနှင့် ပေကျံနေပြီဖြစ်သည်။ အေးမကတော့ပျော့ခွေ၍ ထိုင်နေပါသည်။ “ အေးမ… ” သူကအားအပြည့်နှင့်ခေါ်သော်လည်း အေးမကတော့ မော့ကြည့်ရုံလောက်သာ မော့ကြည့်လိုက်ပါသည်။ အေးမ၏ ထိုအပြုအမူကိုသဘောမကျဖြစ်ကာ ‘အေးမ နင်ကငါခေါ်နေတာကိုပြန်မထူးပေါ့လေ’ဟုဆိုကာ ပျော့ခွေ၍ ထိုင်နေသော အေးမကိုဆွဲထူလိုက်ပြီး အေးမ၏ ဖင်ကိုလက်ဝါးဖြင့် ရိုက်လိုက်ပါတော့သည်။ အားမရှိလောက် အောင်ပျော့ကျနေသည်မှန်သော်လည်း နာကျင်မွုကြောင့်အေးမလန့်ဖြန့်သွားပါသည်။ “ နင်က ငါခေါ်နေတာကိုမထူးဘူးပေါ့ဟုတ်လား…. ကဲဟယ်.. ကဲဟယ်.. ” ဦးဖိုးအောင်သည်အေးမ၏တင်ပါးကို လက်ဝါးဖြင့်တဖြန်းဖြန်း ထပ်ရိုက်ပါတော့သည်။ ၁ဝချက်၊ ၁၅ချက် လောက်ရိုက်လိုက်ပါသည်။ “ နောက်ငါခေါ်ရင်သေချာထူး ကြားလား” “ ဟုတ်ကဲ့… ” ထူးရန် အားနည်းနေသော်လည်း အရိုက်ခံရမည်ကို စိုးသောကြောင့် အားသုံး၍ ထူးလိုက်ရပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တော့ဦးဖိုးအောင်သည်အေးမအား အမျိုးမျိုးလက်စွမ်းပြပါသည်။ အေးမအခန်းနှင့်သူတို့လင်မယား အခန်းသည်အပေါ်ထပ်တွင်ဘေးချင်းကပ်လျက်မို့အိမ်တွင်ဒေါ်လှလွန်းသူမရှိချိန်နှင့်ညဖက်လူခြေတိတ်ချိန်များ တွင်အေးမအား နှိပ်စက်ပါတော့သည်။
အစပိုင်းတွင် အေးမအဖုတ်ကို အမျိုးမျိုး ကိုကလိပါသည်။ အေးမအဖုတ်သည်လည်း အရွယ်နှင့်မလိုက် အောင်ပင် အပေါက်ကျယ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဦးဖိုးအောင်သည် အေးမအားလက်ဖြင့်သာ အဖုတ်နှင့်နို့များကိုလုပ် သော်လည်း အေးမ ၈ တန်းအရွယ်ထိအေးမအား လိုးခြင်းကိုမူမပြုလုပ်သေးပါ။ သို့တိုင်အောင်အေးမအား သူ၏ လီးအား စုပ်ပေးခြင်း၊ လျက်ပေးခြင်းများကိုတော့ အမြဲတန်းလိုလို လုပ်ခိုင်းတတ်သည်။ သူရေချိုးသည့်အခါ တော် တော်များများတွင် အေးမအား ရေချိုးခန်းအတွင်းခေါ်၍ ချေးတွန်းခိုင်းတတ်သည်။ အေးမသည် တနေ့တကြိမ် လောက်အနည်းဆုံးအနေဖြင့်သူ၏ဂွေးကိုစုတ်ရတတ်ပြီး လရည်များကိုလည်း သောက်ရတတ်သည်။ ဦးဖိုးအောင်ထို့သို့လုပ်နေခြင်းမှာ အခွင့်အခါ တိုက်ဆိုင်တာလည်းပါသလို တချိန်က သူ့ကိုအလေးမထားခဲ့ သော အေးမအမေ၏ အပြစ်ကြွေးများကိုအေးမထံတွင်တောင်းနေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ အေးမအမေရှိစဉ်က သူတို့ အမျိုးမျိုးလိုးဖူးခဲ့ကြသော်လည်း သူကသာ အေးမအမေအဖုတ်ကို စုပ်ပေး၊ လျက်ပေးရပြီး အေးမအမေကတော့ သူ့ဂွေးကိုရွံသည်ဆိုကာ မည်သို့မျှမလုပ်ပေးခဲ့ဖူးပေ၊ ထို့ထက်မက အေးမ၏အမေသည်သူ့အပေါ်ကျွန်တယောက် လိုဆက်ဆံခြင်းသည်သူ့အတွက်အခဲမကျေစရာတခုပင်ဖြစ်နေပါတော့သည်။ ဦးဖိုးအောင်သည်သူ၏မကျေနပ်ချက်များကို အေးမ၏ ဂွေးစုပ်ပေးမွုကိုခံရင်း ပြန်လည်မြင်ယောင်လာမိပါ တော့သည်။ ဦးဖိုးအောင်သည်ယရစ်ဖြင့်ပြိုသော လူပြိုကြီးဘဝဖြင့်အချိန်အတော်ကြာကြာနေခဲ့ပြီး ကံအကြောင်း မလှစွာဖြင့်အေးမအမေ၏အလှတောမှာမျောခဲ့ရပါတော့သည်။ရခါစမှစ၍နောက်ဆုံးအချိန်အထိအေးမအမေသည် သူ့အပေါ်အမျိုးမျိုး စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးခဲ့ပါသည်။ လူပျိုကြီးနှင့်မုဆိုးမတို့လက်ထပ်ယူခဲ့ကြပြီးနောက်အိမ်ထောင်ရေး အတွေ့အကြုံ နည်းပါးသော လူပျိုကြီး သည်မုဆိုးမထဘီအောက်ပြားပြားမှောက်ခဲ့ရပါသည်။ အေးမအမေသည်ဦးဖိုးအောင်ကိုအတော်လေးပင်နိုင်လွန်း လှပါသည်။ ဦးဖိုးအောင်ကိုယ်တိုင်က ရိုကျိုးလွန်း၍သာ ထိုသို့အပြတ်အသတ်အနိုင်ယူနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ညတိုင်း မိန်းမကို နှိပ်နယ်ပေးသည်။ မိန်းမက လေးဘက်ထောက်ခိုင်း၍ မြင်းလုပ်စီးမည် ဆိုလျှင်လည်း မကြီးမငယ်နှင့် လေးဘက်ထောက်ကာစီးစေသည်။ အေးမအမေသည်လည်းနိုင်လို့ရမှန်းသိသဖြင့်ပိုအနိုင်ယူလာသည်။အရင်ကသာမာန်သာမြင်းစီးသော်လည်း အဆင့်တတ်၍ အဝတ်များကိုချွတ်စေသည်။ လင်မယားချင်း ကာမဆက်ဆံရာတွင်လည်း ဦးဖိုးအောင်၏ ဂွေးကို ရွံသည်ဟူ၍ အကြောင်းပြကာ သူမဘာမျှမလုပ်ပေးသော်လည်း ဦးဖိုးအောင်ကိုတော့သူမ၏ အဖုတ်နှင့်ဖင်များကို လျှက်ပေး၊ စုပ်ပေးပြီးမှသာ သူမနှင့်ကာမဆက်ဆံစေသည်။ ဖင်ကိုလျှက်ပေးခိုင်းရာတွင်စအိုပေါက်ထဲထိတိုင်လျှာကိုထည့်ရသည်။ သူမ၏စအိုပေါက်ညိုညိုလေးတွင် လျှာထိုးထည့်၍ ဖင်ထဲမှ ချီးအရသာကို ခံစားခိုင်းသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာလည်း ဦးဖိုးအောင်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ အေးမအမေက သူမကိုဘယ်လောက်ထိချစ်နိုင်လဲမေးချိန်တွင်ဦးဖိုးအောင်က သူမ၏ကိုယ်မှထွက်သော အညစ် အကြေးကိုပင် ချစ်နိုင်ကြောင်းကို ဖြေလိုက်ပါသည်။ ထိုသည်ကို အေးမအမေက“ မယုံပါဘူး တကယ်ချစ်မချစ် လက်တွေ့ပြရမယ်” ဟုဆိုလာပြီး အဲ့အချိန်မှစ၍ စတင်ခဲ့ပါတော့သည်။ နေ့ဖက်တွင်ကိုယ့်အလုပ်နှင့်ကိုယ်ရွုပ်နေတတ်ကြပြီး ညအချိန်မှ နှစ်ယောက်သားပြန်ဆုံကြသည်။ အခန်း တွင်း ပြန်ရောက်ပြီဆိုသည်နှင့် ဦးဖိုးအောင်သည် အေးမအမေအညောင်းပြေဖို့ရာ နှိပ်နပ်ပေးရပါသည်။ သူမ အညောင်း ပြေသွားချိန်တွင်တော့ အခါတရံ ဦးဖိုးအောင်ကို မြင်းလုပ်၍စီးပါသည်။ မြင်းမစီးဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ နောက်လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်တဲ့သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုဦးဖိုးအောင်က လျှက်ပေးရပါသည်။ ရေမချိုးရသေးသော ချွေးများနှင့်စီးကပ်ကပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဦးဖိုးအောင်သည်နေ့စဉ်လျှက်ပေးရပါသည်။ လိုး ဖို့ခွင့်ပြုသောနေ့များတွင်တော့အဖုတ်ကိုလျှက်ပေး၊ စုပ်ပေးပြီးနောက်လိုးနိုင်ပြီး လိုးခွင့်မရသော နေ့များတွင်တော့ ဦးဖိုးအောင်သည် လိင်ကျွန်တကောင်ဖြစ်ရပါသည်။ သူမခန္ဓာကိုယ်မှချွေးစေးများကို လျှက်ပြီးပြီဆိုပါက သူမခိုင်း သမျှကိုလုပ်ရပါတော့သည်။ တခါတရံ သူမသည် ဦးဖိုးအောင်အား သူ့ဂွေးသူပြန်စုပ်ပြခိုင်းပါသည်။ ဦးဖိုးအောင်ကလည်းခိုင်းသည့်အ တိုင်း လုပ်ပါသည်။ သို့သော်ပြန်မစုပ်နိုင်ဘဲ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းသာ မိုးပေါ်ထောင်နေပါသည်။
ဒါဆိုကြည့်၍ အေးမအမေက ရယ်ပါသည်။ ဒါကတော့သူမပျင်းတဲ့ညတိုင်း လုပ်ခိုင်းတတ်ပါသည်။ အေးမအမေသည်နောက်ထပ်အဆင့်ဆင့်တတ်ကာ ဦးဖိုးအောင်အား ပို၍ပို၍ အနိုင်အထက်ပြုလာပါသည်။ ဦးဖိုးအောင်အား သူမ၏ကျင်ငယ်ရည်များကိုသောက်ခိုင်းလာပါသည်။ သို့တည်းမက ဦးဖိုးအောင်သည်ကိုယ့်သေး ကိုပင် သောက်ရတတ်ပါသည်။ ဦးဖိုးအောင်ကို ကို့ဂွေးကိုယ်ပြန်စုပ်ခိုင်းသည်၊ မရဘဲခြေထောက်နှစ်ချောင်းက မိုးပေါ်ထောင်နေချိန်တွင်အေးမအမေသည်ဦးဖိုးအောင်၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ်တွင်တတ်ထိုင်၍ ဦးဖိုးအောင် အား အောက်မှပါးစပ်ဟ အနေအထားဖြင့်နေစေပါသည်။ ထို့နောက်မှတော့ သူမသေးပေါက်ပါတော့သည်။ သူမ၏သေးရည်များသည်ဦးဖိုးအောင်ပါးစပ်ထဲသို့အဝင် နည်းပြီး မျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်များကိုတော့ ရွဲရွဲစိုစေပါသည်။ နောက်တမျိုးကတော့ သူမကလာထိုင်၍ သေးပေါက် ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဦးဖိုးအောင်ကိုပင်သေးပေါက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အဲ့လိုအခါမျိုးတွင်တော့ဦးဖိုးအောင်သည်ခေါင်းကို လောင်းချိုးထားသလိုသူ၏သေးများဖြင့်စိုရွဲနေတတ်ပါသည်။ ဒီအနိုင်ကျင့်မွုများသည် အစပိုင်းတွင် လုံးဝမသိသာသော်လည်း အေးမအမေနောက်ထပ် ယောင်္ကျား တယောက်နှင့်ဖေါက်ပြန်ချိန်တွင်တော့ရေနံဆီပုံးပေါ်ကိုဆေးလိပ်မီးကျသကဲ့သို့ထပေါက်ကွဲပါတော့သည်။ အေးမ အသက်၉နှစ်လောက်မှာတော့ ဦးဖိုးအောင်တို့ အိမ်ထောင်ရေးသည်ပျက်စီးနေပြီဖြစ်သည်။ အခုအချိန်တွင်တော့ ဝဋ်လည်လည်စမြဲဆိုသလိုအေးမအမေ၏ဝဋ်များကိုအေးမခံနေရပြီဖြစ်သည်။ အေးမ၏ သွားများသည် အရသာခံနေသော ဦးဖိုးအောင်ကို အရသာပျက်စေလိုက်ပါတော့သည်။ ဆစ်ခ နဲ ဖြစ်သွားသည်နှင့်ဦးဖိုးအောင်အတွေးများ ပျက်ပြယ်သွားပြီး သူ၏ဂွေးနာသွားသဖြင့်အေးမ၏ဆံပင်ကို လှမ်းဆွဲ လိုက်ပါသည်။ အေးမလည်း လန့်ဖြန့်သွားပါသည်။ ထို့နောက်အေးမပါးကို နှစ်ချက်လောက်ချပါသည်။ ထို့နောက် တွင်တော့အေးမအား ဆွဲယူ၍ကုတင်ပေါ်တွင်လှဲစေလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် သူ၏အနည်းငယ်လျှောချထားရာမှ ကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ပါသည်။ အပေါ်မှဖုံးအုပ်လိုက်တော့ ဦးဖိုးအောင်၏ တင်ပါးကြီးကြောင့်အေးမတယောက်အသက်ရွူ ကျပ်သွားပါသည်။ သို့သော်လည်း အပေါ်မှတတ်ဖိ ထားသူက မဖယ်ပေးသဖြင့်အသက်ရွူရန်မနဲကိုကြိုးစားနေရပါသည်။ “ ဟဲ့အသုံးမကျတဲ့ကောင်မ…ငါ့ဖင်ကိုလျှက်ပေးစမ်း ” အေးမလည်း အသက်ရွူချောင်ရန်ဖင်လုံးကြီးနှစ်လုံးကိုလျှက်ပေးလိုက်ပါသည်။ အချိန်အတော်ကြာ လျှက် ပေးပြီးချိန်တွင်တော့အေးမကိုခဏအနားပေးပါသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ဦးဖိုးအောင်သည်သူ၏ စအိုပေါက်ကို လျှက်ခိုင်းပြန်ပါတော့သည်။ ဒီတခါမှာတော့ အေးမအတွက်အတော်ပင်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ စအိုကြီးကိုဖြဲ၍ အပေါက် ကိုလျှာဖြင့်သေချာလျက်ပေးရပါသည်။ မစင်နံ့များ ရနေသည်မို့တချက်တချက်ပြန်ပြန်ပျို့လာတတ်ပါသည်။ သို့သော်အန်ပါက အန်သမျှကို ပြန်စားရမည်ဆိုသဖြင့်မအန်အောင်ကိုယ်ကိုကိုယ်မနဲထိန်းနေရပါတော့ သည်။ ဦးဖိုးအောင်သည်စအိုပေါက်လျက်ခြင်းကို အချိန်အတော်ကြာကြာ အေးမအားခိုင်းစေပါသည်။ နောက်ကြုံ တိုင်းလည်း သူ့စအိုပေါက်ကို အေးမက လျက်ပေးရပါသည်။ တခါတရံဆိုလျှင်သူအိမ်သာတတ်နေချိန်တွင်အေးမ သည်သူ၏ဂွေးကိုစုပ်ပေးနေရပြီး သူကအရသာခံ၍ မစင်စွန့်နေတတ်ပါသည်။
အေးမကို အခုအချိန်အထိ မစင်မစားခိုင်းဖူးသော်လည်း ဦးဖိုးအောင်၏ လရည်နှင့်သေးများကိုတော့ အေးမ နေ့တိုင်း သောက်သုံးနေရပြီဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ကာလ အခုအချိန်တွင်တော့ အေးမ၏အသက်သည် ၁ရ ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဆယ်တန်းကို ကျသဖြင့်ဆိုကာ ဦးဖိုးအောင်တို့က အေးမအား ကျောင်းဆက်မထားတော့ပေ။ အိမ်တွင်လည်း အရင်ရှိသော အိမ်အကူအဒေါ်ကြီးကလည်း မရှိတော့သည်မို့ အေးမသည်အိမ်၏ကိစ္စမှန်သမျှကို လုပ်နေရပါတော့သည်။ “ ဟဲ့အေးမ ဘာကြောင်နေတာလည်း ငါ့နောက်ကျောကိုချေးတွန်းပေးစမ်း ” ခိုင်းသည့်အတိုင်း မလုပ်လျှင်အသားနာမည်ဖြစ်သဖြင့်အေးမသည်အမိန့်ကိုအမြဲလိုက်နာနေရပါသည်။ ဒေါ်လှလွန်းသူသည်အေးမအား ချေးတွန်းခိုင်းပြီးချိန်တွင်တော့ရက်စက်ညစ်ပတ်သော အရာများကိုစတင် ပြုလုပ်ပါတော့သည်။ “ အေးမ…. ” “ ရှင်… ” “ ညည်းနဲ့ငါ့ယောင်္ကျားနဲ့ညဖက်ဘာတွေ လုပ်နေကြတာလဲ… ” ဒေါ်လှလွန်းသူ၏ အမေးသည် သိလျက်နှင့်မေးနေမှန်း အလွန်ပင် သိသာလွန်းလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် အေးမ သည်လည်း ကြောက်ကြောက်နှင့်ပင်…. “ သမီးမှာ အပြစ်ရှိလို့ဦးလေးက အပြစ်ပေးနေတာပါ… ” “ ညည်းက ဘာအပြစ်တွေ ကျူးလွန်ထားလို့လဲ….ပြောစမ်း ငါ့ကို ” “ ဟို..ဟို…ဟိုလေ… ” “ ဟိုလေဒီလေ မလုပ်နေနဲ့ ညည်းဦးလေးက အချိုးမကျတဲ့ညည်းပုံစံကို သဘောမကျလို့ အပြစ်ပေးတာ မှတ်လားးးး ” ဘာပြန်ပြောရမယ်မှန်း မသိသဖြင့်အေးမသည်ငယ်သူပီပီလူကြီးပြောသမျှ ခေါင်းညိမ့်လိုက်ပါတော့သည်။ အဲ့ဒီ့မှစ၍ အေးမသည်ဦးဖိုးအောင်အတွက်သာမက ဒေါ်လှလွန်းသူအတွက်ပါ ကျွန်အဖြစ်အမွုထမ်းရပါတော့သည်။ “ ညည်းရဲ့အချိုးမကျတဲ့ပုံစံကို ငါလည်းသဘောမကျဘူး ငါလည်းညည်းကို ညည်းဦးလေး အပြစ်ပေးသလို အပြစ်ပေးရမယ်ခံမှာလား….. ” သူတို့ပြောသည့်အချိုးမကျသည့်ပုံစံကိုအေးမ မသိသော်လည်း ငြင်းလည်းခံရမည်၊ မငြင်းလည်းခံရမည်မို့ ငြင်းမနေတော့ဘဲ ခေါင်းကိုသာ ညှိမ့်နေလိုက်ပါသည်။ “ ကဲ ဒါဆိုအခုကစမယ်” “ ညက ညည်းဦးလေးဖင်ကိုလျှက်ပေးသလိုငါ့ကိုလည်း လျှက်ပေးစမ်းးး ငါရေချိုးမယ်ညည်းက အောက်က လျှက်ပေးနေ ” ဒေါ်လှလွန်းသူသည်ရေကိုတဝုန်းဝုန်းနှင့်ချိုးနေပြီး အေးမမှာတော့ဒေါ်လှလွန်းသူရဲ့တလွုပ်လွုပ်နှင့်ဖင်ကို သူမ၏လျှာဖြင့်လျက်ပေးနေရပါသည်။ ထို့အပြင်အပေါ်မှလောင်းချလိုက်သော ရေများကြောင့်လည်း တစ်ကိုယ်လုံး တွင်ရေများစိုရွဲနေပြီဖြစ်သည်။ ဒေါ်လှလွန်းသူရေချိုးပြီးချိန်တွင်တော့….. “ အေးမ…ညည်း ကျန်တဲ့အဝတ်တွေကိုသေချာလျှော်ထားးး ” “ ဟုတ်ကဲ့ ” ထို့နောက်ဒေါ်လှလွန်းသူသည်ရေချိုးခန်းမှအပြင်သို့ထွက်လာပါသည်။ “ အော်…နေအုန်းးးး ” “ ညည်းရဲ့ဒီပုံစံကိုငါသဘောမကျဘူး ညည်းအခုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက်” “ ရှင်” “ မရှင်နေနဲ့နောက်ပြီး အိမ်ကလူတွေချည်း ရှိနေချိန်ဆိုညည်းအဝတ်အစား လုံးဝမဝတ်ရဘူး ကြားလားးး ” “ အခုဝတ်ထားတာတွေကိုလည်း ချွတ်လိုက်တော့ ” ဒေါ်လှလွန်းသူသည်အေးမအဝတ်များချွတ်၍ ကိုယ်လုံးတီးဖြင့်အဝတ်များ ထိုင်လျှော်နေပြီဆိုမှသာ အနား မှ ထွက်ခွာသွားပါတော့သည်။ အေးမတို့အိမ်တွင်ဦးဖိုးအောင်၊ ဒေါ်လှလွန်းသူ၊ သူတို့၏ကလေး၊ အေးမ၊ ကလေး ထိန်းနှင့်ခြံစောင့်အဘိုးကြီးတို့သာရှိပါသည်။
ဦးဖိုးအောင်က ညဖက်မှသာ ပြန်ရောက်တတ်ပြီး ဒေါ်လှလွန်းသူနှင့် ကလေးထိန်းတို့သာ အိမ်ပေါ်တွင်အမြဲရှိနေတတ်သည်။ ခြံစောင့်အဘိုးကြီးကတော့ အိမ်ဘက်သို့ယောင်လို့ပင်မလာချေ။ ကလေးထိန်းသည်လည်း ကလေးအနား တွင်သာ အမြဲရှိနေသဖြင့်အေးမ၏အဖြစ်မတွေ့သေးပေ။ ကလေးကိုလည်း သိပ်ပြီးပြီမို့ အပေါ့အပါးသွားရန်ညိုမ သည်အောက်ထပ်သို့ ဆင်းလာပါသည်။ အနောက်ဘက်မှ တဖုန်းဖုန်းရိုက်သံကြောင့်အေးမအဝတ်လျှော်နေတာ ဖြစ်မည်ဟုသိလိုက်ပါသည်။ ရေချိုးခန်းရှေ့သို့ရောက်ချိန်တွင်တော့အဝတ်အစားမပါသော အေးမသည်ငုတ်တုတ် ထိုင်၍ အဝတ်များကိုရိုက်လျှော်နေပါသည်။ “ ဟင်… ဟဲ့အေးမဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ… ” ညိုမသည်အလန့်တကြားဖြင့်မေးလိုက်ပါသည်။ “ အဝတ်အစား မဝတ်ဘဲဘာလို့ဒီအတိုင်း နေနေတာလဲ… အဝတ်အစား ဝတ်လေ.. ” “ ဒေါ်လေးက မဝတ်ရဘူးတဲ့နောက်လည်း ဒီအတိုင်းဘဲ နေရမယ်တဲ့ ” ညိုမသည်ကြောင်အမ်းအမ်း ဖြစ်သွားပါသည်။ ထို့အချိန်တွင်သူတို့အနားသို့ လူတယောက်ရောက်လာ ပါသည်။ “ ဟုတ်တယ်ညိုမရေ… ငါသူ့ကိုမဝတ်ခိုင်းထားတာ ” “ အချိုးမပြေလို့ဒီလိုထားထားတာ နောက်လည်း ဒီအတိုင်းဘဲ ထားမှာ ” “ ဟာ ဒေါ်လေးကလည်း ကောင်းပါ့မလားးးး ” ညိုမသည်တယောက်ယောက်မြင်သွားရင်ဖြင့်ဆိုသည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ “ ကောင်းတာပေါ့ညိုမရဲ့ဒီကောင်မက ဒီလိုထားတာ အကောင်းဆုံးဘဲ ” ထိုနေ့မှစ၍ အေးမသည်အိမ်တွင်ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့်သာ နေရပါတော့သည်။ အစပိုင်းတွင်သူမ၏ကုန်းလိုက် ကွလိုက်လျှင်ပြဲသွားသောဖင်များ၊ အဖုတ်များကိုလိုက်ကြည့်မိကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်တော့အိမ်သားများ သည်လည်းမြင်နေကြမို့သူမ၏ဝတ်လစ်စလစ်ပုံစံကိုပင်ပုံမှန်ဟုမြင်လာပြီး တခါတရံအပြင်သွားချိန်အဝတ်အစား ဝတ်လိုက်သည်ကိုသာ အထူးအဆန်း ပုံစံဖြစ်နေပါတော့သည်။ ညိုမသည် ဒေါ်လှလွန်းသူ၏ ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူဖြစ်ပြီး ခလေးထိန်းရန်အတွက်ဒေါ်လှလွန်းသူမ ခေါ် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော ညိုမသည်အေးမထက်အသက်လပိုင်းခန့်သာ ကြီးသူ ဖြစ်သည်။ကျောင်းပညာရေးအတွက်စရိတ်မရှိသောကြောင့်6တန်းတွင်ကျောင်းထွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ဒလတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး မွေးချင်းများစွာရှိခြင်းနှင့်မိသားစုစီးပွားရေးကြောင့်မပြည့်မစုံဖြင့်နေထိုင်လာရသူဖြစ်သည်။ ညိုမငယ်စဉ်ဘဝ….. ငယ်စဉ်က အိမ်စီးပွားရေး မကောင်းသဖြင့်ညိုမသည်ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သော အဒေါ်တဦးအိမ်တွင်‘ထမင်း စားကျွန်ခံ’ဘဝဖြင့်နေထိုင်ခဲ့ရသည်။အသက်12နှစ်အရွယ်ညိုမသည်ရောက်စတွင်အတော်လေးကိုဒုက္ခခံခဲ့ရသည်။ အပေါက်ဆိုးသောအဒေါ်နှင့်သူမ၏တဦးတည်းသောသမီးသည်ညိုမအတွက်တော့ ငရဲမင်းဟုပင်ထင်ရအောင်ပင် ရက်စက်လွန်းလှပါသည်။ နံနက်အုန်းမေါင်းမခေါက်မီတွင်ထရပြီး ထမင်းချက်ပြုတ်ရပါသည်။ ကုသိုလ်ရေးမို့ပင်ပန်းသည်ဟု မဆိုသာ ပေ။ တံမြက်လှည်း၊ ကြမ်းတိုက်အလုပ်များဖြင့် နံနက်နေရောင် ထွက်သည့်အထိပင်ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ရှိလူများ ရေချိုးရန်ရေဖြည့်ပေးထားရပြီး သူတို့အားလုံးချိုးပြီးချိန်မှသာ သူမအလှည့်ရောက်ပါတော့သည်။ အဝတ်လျှော်ရာတွင်ဖြူစင်နေဖို့ရာအားကုန်ကြိုးစားရပါသည်။အဝတ်များမပြောင်စင်ပါကမပြောင်စင်သော အဝတ်ဖြင့်အရိုက်ခံရတတ်သောကြောင့်ပြောင်စင်အောင်သေချာလျှော်ရပါသည်။ ညိုမအဒေါ်၏ တဦးတည်းသော သမီးလေးသည် အသက်၁၈ကျော်နေပြီမို့ ရာသီလာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ သူမ၏အောက်ခံဘောင်းဘီများအား စင် အောင်မလျှော်မိပါက ဘောင်းဘီခွကြားကိုလျှာဖြင့်ထပ်ခါထပ်ခါ လျက်ခိုင်းတတ်ပါသည်။ တခါကဆိုလျှင် အဝတ်များကိုရေစင်အောင် မညှစ်မိလို့ဆိုကာ ညိုမ၏ပါးစပ်ကို ဟခိုင်းထား၍ ညိုမ အဒေါ်မှအဝတ်ရေများကို ညှစ်ထည့်ပါသည်။ ဝင်လာသမျှကိုလည်း ထွေးမထုတ်ရဘဲ သောက်ရပါသည်။ အိမ်တွင် ညိုမအဒေါ်နှင့် သူ့သမီးသာရှိပြီး အဒေါ်ယောင်္ကျားကတော့ ပွဲစားပီပီ အိမ်မကပ်ပါ။ အိမ်တွင်ရေလုံအိမ်သာ ရှိသော်လည်း ညဖက်တွင်စွန့်သမျှများကိုနံနက်တိုင်းသွန်ပေးရပါသည်။ အဒေါ့်သမီးလှလှ၏အခန်းထဲမှအထွက်တွင်မတော်တဆခလုတ်တိုက်မိသွားပြီးညိုမသည်သယ်လာသော သေးခွက် မှောက်ကျသွားပါသည်။ မှန်တင်ခုံရှေ့တွင် အလှပြင်နေသောလှလှသည် အသံကြားသည်နှင့်တဆက် တည်း လှည့်ကြည့်လာပါသည်။ ညိုမလည်း ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်သွားပါသည်။ “ ဟဲ့ညိုမ နင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ၊ ငါ့အခန်းရှေ့ကြီးမှာ သေးနံ့တွေ နံကုန်တော့မှာဘဲ… ” “ ဘာရပ်ကြည့်နေတာလဲ သုတ်လေ… ” အဲ့ဒီကျမှပင် ပြာပြာသလဲနှင့် ညိုမအဝတ်စုတ်သွားယူပါသည်။ အဝတ်စုတ်ဖြင့် ကြမ်းတွင်ပေကျံနေသော သေးများကို လိုက်သုတ်လိုက်ပါသည်။ သို့သော် အနံ့ကတော့ မပျောက်သွားပေ။ လှလှသည် နှာခေါင်းကို တရွုပ်ရွုပ်လုပ်ရင်း “ ညိုမ နင်ဘာနံ့ရလဲ ပြောစမ်း” “ သေးနံ့တွေပါ မလှလှ… ” “ နင်ကိုငါပြောတယ်ပြောင်အောင်သုတ်ဆိုတာကိုအခုအနံ့တွေဒီလောက်ထွက်နေတာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ” ညိုမလည်း ဘာမှမပြောတတ်တော့တာမို့ ခေါင်းကြီးငုံ့၍သာ နေနေပါတော့သည်။ အဲ့အချိန်တွင်လှလှ၏ အမေသည်အခန်းရှေ့သို့ရောက်လာပါသည်။ “ ဟဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ ” “ ဒီမှာလေ ညိုမပေါ့သေးခွက်မှောက်ကျတာလေ ” “ အေးဟယ်.. ဟုတ်ပါရဲ့နံ့ဆော်နေတာဘဲ ” “ ညိုမ..ညည်းလုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းချည်းဘဲ ” ဟုဆိုကာ ညိုမ၏ခေါင်းကိုလှမ်းခေါက်လိုက်ပါသည်။
ခေါက်ချက်ပြင်းသဖြင့်ညိုမ“အား”ခနဲအသံတချက်ထွက်သွားပါသည်။ “အဲ့နေရာကိုရေနဲ့သေချာပြန်ဆေးလိုက်ပြီးရင်ညည်းငါ့ဆီလာခဲ့၊ညည်းကိုကောင်းကောင်းအပြစ်ပေးရမယ်” လှလှနှင့်ညိုမအဒေါ်သည်အိမ်ရှေ့သို့ထွက်ခွာသွားပါသည်။ ညိုမသည်လည်း သေးနံ့နံနေသော ကြမ်းကို သန့်ရှင်းနေရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့သည်ညိုမအတွက်ပထမဦးဆုံး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့်အပြစ်ပေးခံ ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကြမ်းများကိုအနံ့မကျန်အောင်သန့်ရှင်းပြီးချိန်တွင်တော့အိမ်ရှေ့ သို့ညိုမထွက်လာခဲ့ပါသည်။ TV ကြည့်နေသော အဒေါ့်နားမှာ မတ်တပ်သွားရပ်လိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်ဘာမှမပြောမဆိုဘဲ အဒေါ်မှ ညိုမဝတ်ထားသော ထဘီလေးကို ဆွဲချလိုက်ပါသည်။ ညိုမလှမ်းဆွဲသော်လည်း လက်ကိုပြန်အရိုက်ခံလိုက်ရပြီး ထဘီလေး ကွင်းလုံးကျွတ်သွားပါသည်။ “ ညည်းဒီအတိုင်းလက်မြောက်နေ’ ဟုပြောပြီး သူမတို့ကတော့TV ကိုသာ ဆက်ကြည့်နေကြပါသည်။ ခဏ အကြာ TV ဇာတ်လမ်း ပြီးသွားချိန်တွင်တော့ညိုမဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပါသည်။ ညိုမသည်လည်း အောက်ပိုင်းတွင် ဗလာကျင်းခံထားရသဖြင့် ရှိုးတို့ရှန့်တန့်ဖြစ်နေပါသည်။ အခုအချိန်တွင် အိမ်သို့ဧည့်သည်တယောက်ယောက် ရောက်လာမည်ကိုလည်း ကြိုတွေး၍ ကြောက်နေပါသည်။ “ ညိုမ…ခြံထဲမှာ ညည်းကိုရိုက်ဖို့တုတ်သွားကောက်ခဲ့စမ်း ” ညိုမလည်း ခြံထဲကိုဒီပုံစံကြီးဖြင့် မဆင်းရဲသည်မို့ ပေကပ်ကပ်လုပ်နေပါသည်။ ထို့သို့ပေကပ်ကပ်လုပ်နေ သည်ကို ညိုမအဒေါ်က စိတ်မရှည်စွာဖြင့် တင်ပါးကိုလက်ဝါးပြားဖြင့် သုံးလေးချက် ဆင့်ရိုက်ပါတော့သည်။ ညိုမလည်း နာလွန်းသဖြင့်‘တအားအားးးတအီးအီးးး’ ဖြစ်သွားပါသည်။ “ သွားအခုသွားကောက်သွားးး ပေကပ်ကပ်လုပ်နေရင်ထပ်အရိုက်ခံရမယ်” ထပ်အရိုက်ခံရမည်ကို စိုးသောကြောင့်ပိပိလေးကိုလက်ဖြင့်ဖုံးကာ ခြံထဲသို့ဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ နံနက်ခင်း အချိန်ဖြစ်သောကြောင့်အားလုံးကတော့ လင်းရှင်းနေပါသည်။ ညိုမအိမ်ရှေ့ထင်းပုံဘေးမှ ဝါးခြမ်းပြားတခုကိုသွား ယူလိုက်ပါသည်။ အလျင်အမြန်ယူ၍ အိမ်ပေါ်သို့ပြန်တတ်ခဲ့ပါသည်။ “ ဒေါ်လေးးးး ” ညိုမဝါးခြမ်းပြားကို သူ့မအဒေါ်လက်ထဲသို့ ကမ်းပေးလိုက်ပါသည်။
လှလှကတော့ သဘောကျစွာဖြင့်ပင် ဘေးမှကြည့်နေပါသည်။ ပြီးနောက်လက်မြောက်ထား၍ အိမ်ရှေ့ဘက်ကို မျက်နှာပေးကာ နောက်လှည့်ပေးထား ရပါသည်။ “ ဖြောင်းးး ဖြောင်းးး ဖြောင်းးး ” ရိုက်ချက်ပြင်းမပြင်းတော့မသိငါးချက်၊ ခြောက်ချက်ဖြင့်ပင်ဝါးခြမ်းပြား သွင်သွင်ကျိုးသွားပြီဖြစ်သည်။ “ ညည်း ဝါးခြမ်းပြားကလည်း ပျော့လိုက်တာ နောက်တချောင်း သွားကောက်ချည်” ညိုမလည်း မျက်ရည်များဖြင့် တရွုတ်ရွုတ်ဖြင့် ခြံထဲသို့ဆင်းရပြန်ပါသည်။ နောက်ထပ်တချောင်း ထပ် ကောက်၍ ပေးလိုက်ပါသည်။ ဒီတခါတော့ ဆယ်ချက်လောက် ကျွေးလိုက်ရပါသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ဝါးခြမ်းပြား ထပ်မကောက်ခိုင်းတော့ဘဲ ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းပါတော့သည်။ ထိုင်ထမည်မျှလုပ်ရမည်ကိုမပြောဘဲ ရပ်ဆိုမှ ရပ်ရမည်ဟုသတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ညိုမအောက်ပိုင်းဗလာကျင်းပုံစံဖြင့် တင်ပါးမှနာကျင်မွုကြောင့် ငိုလည်းငို ထထိုင်လည်းလုပ်နေရပါသည်။ သူတို့ကတော့ နောက်ထပ်ကုလားကား အပိုင်းတပိုင်းကို ကြည့်နေကြပါသည်။ ထထိုင်လုပ်ခြင်းကို မရပ်ခိုင်းသေး သော်လည်း ညိုမခြေထောက်များကတော့ယိုင်လဲချင်နေပြီဖြစ်သည်။ ထပ်မံအရိုက်ခံရမည်စိုးသဖြင့်သာ အားတင်း ၍ လုပ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်လှလှမှ TVကြည့်နေရာမှထ၍ ညိုမအနားရောက်လာပါသည်။ ပြီးနောက်ညိုမ၏ အရိုက်ခံထားရသော အရှိုးရာများဖြင့်ဖင်ကို ဖိဆွဲလိုက်ပါသည်။ ညိုမအော်သံနှင့်အတူ မျက်ရည်များ ဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက်ဖြင့်ထပ်မံကျလာပါသည်။ ညိုမတင်ပါးကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးရိုက်၍ နောက်ဖေး ဘက်သို့ထွက်သွားပါသည်။ ခဏအကြာတွင်လှလှနောက်ဖေးမှ ပြန်လာပါသည်၊ ထိုအချိန်တွင်လည်း ညိုမတင်ပါး ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ထပ်မံရိုက်ပါသေးသည်။ ညိုမ ထိုင်ထလုပ်နေတာလည်း နှေးကွေးလာပြီဖြစ်သလို ညိုမအဒေါ်သည်လည်း TV ကြည့်ရင်း အိပ်ပျော် သွားပြီဖြစ်သည်။ ထိုအခိုက်တွင်လှလှသည်ညိုမအနား ထပ်မံရောက်လာပါသည်။ “ ညိုမ..နင်ထိုင်ထ ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး မှတ်လားးး ” ညိုမလည်း ပင်ပန်းနေပြီမို့ခေါင်းညိမ့်လိုက်ပါသည်။ “ ထိုင်ထဆက်မလုပ်ချင်ရင်နင်ငါခိုင်းတာကိုလုပ်ရမယ်.. လုပ်မှာလားးး ” ညိုမလည်း ကောက်ရိုးတမျှင်ကိုပင်လှမ်းဆွဲလိုက်ပါသည်။ “ ဒါဆိုအရင်ဆုံး နင့်အင်္ကျီချွတ်လိုက်” “ ရှင်” “ ရှင်မနေနဲ့နင်ဘဲငါခိုင်းတာ လုပ်မယ်ဆို ” ညိုမအပေါ်ပိုင်းတွင် ဝတ်ထားသော အင်္ကျီလေးကို ချွတ်လိုက်ပါသည်။ အခုအချိန်တွင်တော့ ညိုမကိုယ် လုံးတီး ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ညိုမ၏ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားသည် ဝါဆိုမိုးဦး ငယ်ငယ်က ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။
အနီးအနားတွင်ယောင်္ကျားလေးများ မရှိသော်လည်း ကြောက်စိတ်ကတော့မွန်နေပါသည်။ လှလှက ညိုမနားရွက် ကိုဆွဲ၍ သူမအခန်းရှိရာသို့ညိုမကိုခေါ်သွားပါသည်။ အိမ်ရှေ့တွင်တော့ ဖွင့်ထားသော ကုလားဇာတ်လမ်းတွဲနှင့် အိပ်ပျော်နေသော ညိုမအဒေါ်ကျန်ခဲ့ပါသည်။ လှလှသည်ကုတင်ပေါ်သို့ဦးစွာတတ်လိုက်ပါသည်။ပြီးနောက်သူမဝတ်ထားသောထဘီကိုဖြေလျော့လိုက်ပါသည်။ “ ညိုမလာ.. ငါ့ထဘီအောက်ထဲကိုဝင်” ညိုမက မဝင်သေးသဖြင့်လှလှမှညိုမခေါင်းကိုအတင်းဆွဲ၍ သူမထဘီအောက်ထဲသို့သွင်းလိုက်ပါသည်။ “ ငါ့အဖုတ်ကိုလျှက်ပေးးးး ” ညိုမတခါမှမလုပ်ဖူးသည်မို့မလုပ်ရဲ၊ သို့သော်အတင်းခိုင်းသဖြင့်လှလှ၏ အဖုတ်မို့မို့လေးကိုညိုမလျှာ ဖြင့် လျှက်ပေးလိုက်ပါသည်။ လှလှသည်လည်း ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံမို့ရှိန်းတိန်းတိန်း ဖြစ်နေပါသည်။ ခံစားရသော အရသာအပေါ်တွင်လည်း အာသီသတွေ့နေပါသည်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးချိန်တွင်တော့ လှလှပါးစပ်မှ အသံလေးများဖြင့်အတူလှလှအဖုတ်မှ အရည်ကျဲ လေးများ ထွက်ကျလာခဲ့ပါသည်။ ညိုမမှာလည်း ဘာမှန်းမသိညာမှန်းမသိပေမယ့် ထွက်လာသမျှကိုတော့ လျှက် လိုက်ရပါသည်။ ထိုင်ထလုပ်နေရသည်ထက်စာရင် ဒါကတော်သေးသည်ဟုပင် ညိုမတွေးထင်နေမိပါသည်။ သို့သော်အခုမှအစရှိသေးသည်ကိုတော့ညိုမမသိခဲ့ပါ။ အချိန်အခိုက်အတန့်ကြာပြီးနောက် လှလှအခန်းရှေ့သို့ လှလှအမေရောက်လာပါသည်။ ခုတင်ပေါ်တွင် အရသာခံနေသော လှလှကိုတွေ့သောအခါ စိတ်တိုသွားပြီး တံမြက်စီးကိုကိုင်၍ ပွဲကြမ်းပါတော့သည်။ ထိုမှပင် လန့်ဖြန့်ပြီးလှလှရော၊ညိုမပါထပြေးရပါတော့သည်။အဆုံးတွင်တော့အပြစ်ရှိသောညိုမရောအတတ်ကောင်းတတ် နေသောလှလှပါ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့်အိမ်ရှေ့ခန်းတွင်မတ်တပ်ရပ်လက်မြှောက်နေကြ ရပါတော့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တော့လှလှမှသူ့အမေလစ်ရင်လစ်သလိုအဖုတ်ကိုလျှက်ခိုင်းခြင်း၊ စုပ်ခိုင်းခြင်းများကိုလုပ် ခိုင်းတတ်ပါသေးသည်။ သူ့မအမေကလည်း မိတာနဲ့မညှာဘဲ နှစ်ယောက်လုံးကို အပြစ်ပေးပါသည်။ ညိုမအသက် 16 နှစ်တွင်တော့ အေးမတို့အိမ်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတော့သည်။ လှလှက မသွားစေချင်သော်လည်း လှလှအမေက သူ့သမီးအကြောင်းကိုသိနေသဖြင့်ညိုမကိုသူမ၏တဝမ်းကွဲ အမထံပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန် ညိုမ၏နှိုက်မွု့ကြောင့်အေးမအဖုတ်မှသွေးစများပင်ထွက်လာပြီဖြစ်သည်။ “ အေးမ..နင်နောက်ထပ်စောက်ရည်ထွက်အုန်းမလားးးး ” ညိုမသည် အေးမအား ကလေးနိုးအောင်လုပ်ရမလားဆိုကာ ပုခက်တုတ်ဖြင့် အေးမဖင်ကိုရိုက်ပါသည်။ အေမလည်းနာလွန်းသဖြင့်အော်လည်းအော်၊မျက်ရည်လည်းကျမိပါသည်။
ဒါကိုညိုမကမျက်ရည်ကျရကောင်းမလား ဆိုပြီး အေးမအား အပြစ်ပေးပါသည်။ “ မျက်ရည်ကျသလို၊ စောက်ရည်ထွက်သလိုငါလုပ်ပေးမယ်” ဟုဆိုကာ အေးမအဖုတ်ကိုလက်ဖြင့်အားကုန် နှိုက်ပါတော့သည်။ အဖုတ်မှအရည်ထွက်ရုံမက သွေးစများပင်ညိုမလက်တွင်ပါလာပါသည်။ သို့တိုင်အောင်ညိုမ မရပ်သေးပါ အေးမအဖုတ်ကိုဆက်နှိုက်နေပါေးသးသည်။ “ မှတ်ထားးး နောက်ဆိုမလွယ်ဘူးမှတ်.. ဒီထက့်ပိုနာမယ်… ” အေးမလည်း စပ်ဖြန်းဖြန်းဖြစ်နေသော သူမ၏အဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့်အုပ်၍ ညိုမအနားမှ ထွက်လာ ခဲ့ပါသည်။ “ ဟေ့…အေးမ ဒီကိုလာအုန်းးးး ” ဒေါ်လှလွန်းသူက လှမ်းခေါ်သဖြင့်အေးမအမြန်သွားလိုက်ပါသည်။ “ ငါရေချိုးတော့မယ်လေ… ညည်းဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးလား ” ထုံးစံအတိုင်းပင် ဒေါ်လှလွန်းသူ ရေချိုးနေစဉ် တလျှောက်လုံးတွင် ချေးတွန်းပေးခြင်းကို ခဏပြုလုပ်၍ ဒေါ်လှလွန်းသူ၏ ဖင်ကိုနောက်မှထပ်ကြပ်မခွာကပ်၍လျှက်ပေးရပါသည်။ ဒေါ်လှလွန်းသူကခြေထောက်နှစ်ချောင်း ကိုဟပေးလိုက်ချိန်တွင်လည်း အလိုက်တသိပင်ဝင်၍ အဖုတ်ကို လျှက်ပေးရပါသည်။ ဒေါ်လှလွန်းသူ ရေချိုးပြီးစီး သွားမှသာ အေးမတယောက်အနားရပါတော့သည်။ အေးမဒီအိမ်နှင့်အဝေးသို့ထွက်သွားလိုက်ချင်ပြီဖြစ်သည်။သို့သော်သူမတွင်အားကိုးစရာမရှိ၊အပြင်လောက အကြောင်းလည်း သိပ်မသိသည်မို့အေးမသည်လက်ရှိဘဝတွင်သာ အဆင်ပြေအောင်နေနေရပါသည်။ သို့သော် အခွင့်အလမ်းကိုတော့အချိန်ရှိသ၍ အေးမစောင့်စား နေမိပါသည်။ မိုးချုပ်ပြီမို့အိမ်ရှိလူများအားလုံး အနားယူနေချိန်ဖြစ်သည်။ ညိုမသည်အေးမအရင်နေခဲ့သောအခန်းတွင်က လေးနှင့်အတူအိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်ပြီး အေးမသည်အောက်ထပ်အခန်းတွင်သူမ၏မူရင်းပုံစံအတိုင်း ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့် ခွေခွေလေး အိပ်ပျော်နေပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်အေးမအခန်းတွင်းသို့ ဦးဖိုးအောင်ရောက်ရှိလာပါသည်။ ခွေခွေ လေး အိပ်ပျော်နေသော အေးမကိုလွုပ်နှိုးလိုက်ပါသည်။ အေးမ မျက်လုံးဖွင့်၍ နှိုးလာပြီဆိုတာနှင့်ဦးဖိုးအောင်သည်သူ၏လိင်တံကြီးကို အေးမပါးစပ်ဝတွင်တေ့ ပေးလိုက်ပါသည်။ အေးမလည်း အလိုက်သင့်ပင်ပါးစပ်ဟပေးလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက်ဦးဖိုးအောင်၏ တုတ်ခိုင် လှသောလိင်တံကို အေးမပါးစပ်ဖြင့် ‘တပြွတ်ပြွတ်’ စုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။ အတွင်းရှိလျှာဖြင့်လည်း လိင်တံ၏ ထိပ်လေးများကိုလျှက်ပေးနေလိုက်ပါသည်။
အမြဲတစေလုပ်ပေးခိုင်းနေကျမို့ ထိုအခြင်းအရာများသည် အေးမအတွက်အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ပေ။ အေးမ၏ အစုပ်တော်မွု့ကြောင့် လိင်တံမှလရည်များသည် ထိုးထွက်ကျလာပါတော့သည်။ လရည်ပျစ်ပျစ်များကို တစက်အောက်မကျစေဘဲ မိန်ရည်လျက်ရည် အေးမမြိုချ သောက်သုံးလိုက်ပါသည်။ ဦးဖိုးအောင်သည် အေးမ လုပ်ပေးသမျှကိုကြည့်၍ သဘောကျကာ အရသာခံနေပါသည်။ “ ကဲ…လေးဘက်ထောက်လိုက်တော့ ” ဦးဖိုးအောင်သည် အေးမအား အမြဲတန်း လေးဘက်ထောက်ခိုင်း တတ်သော်လည်း လိုးခြင်းမပြုဘဲ အဖုတ်နှင့်စအိုပေါက်ကိုသာ နာကျင်အောင်လုပ်တတ်သည်။ သို့သော်ဒီညတွင်တော့သူ၏လက်ဖြင့်မလုပ်ဘဲ အေးမ တံထွေးများဖြင့်ပေကျံနေသောသူ၏လိင်တံကြီးဖြင့်အေးမအဖုတ်ကိုတေ့လိုက်ပါသည်။အေးမလန့်ဖြန့်သွားပါသည်။ လက်ချောင်းတွေနဲ့တောင် ဒီလောက်နာတာ တုတ်ခိုင်တဲ့လိင်တံကြီးနဲ့ဆိုရင် တော်တော်လေး နာမှာဘဲဟုလည်း တွေးလိုက်မိပါသည်။ “ ညည်းလည်း အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီအရသာကိုခံစားဖူးရမှာပေါ့ ” “ သေချာ လေးဘက်ထောက်ထားနော်…လဲမသွားနဲ့ ” “ နောက်ပြီး အသံမထွက်စေနဲ့အသံထွက်ရင်ညည်းပိုနာမယ်မှတ်” အေးမလည်း ခိုင်းသည့်အတိုင်းပင်သေချာလေး နေပေးလိုက်ပါသည်။ “ အွန့်…. ” “ အွန့်… ” အသံတိုးတိုးဖြင့် ကြိတ်ကာပင် အေးမအော်ရပါသည်။ သို့သော်နာသည့်အရှိန်ကတော့ တော်တော်ပြင်း လှပါသည်။ ဦးဖိုးအောင်သည်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့် အေးမအဖုတ်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်နေပါတော့သည်။ အေးမ အဖုတ်တွင်လည်း အဖြူရည်များ စီးကျနေပြီဖြစ်သလို ဦးဖိုးအောင် တုတ်တွင်လည်း သွေးစနှင့်အဖြူရည်များ ပေကျံနေပြီဖြစ်ပါသည်။ သို့တိုင်အောင်ဦးဖိုးအောင်သည်တချီမပြီးသေးပါ။ ခဏအကြာတွင်တော့ ပြီးတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် ဦးဖိုးအောင်သူ၏တုတ်ကို အေးမအဖုတ်အတွင်းမှဆွဲထုတ် လိုက်ပါသည်။ အေးမသည်ဆတ်ခနဲ ဆွဲထုတ်လိုက်သော ခံစားမွု့ကြောင့်ဟာခနဲဖြစ်သွားပါသည်။ ဦးဖိုးအောင်သည် သူ၏လိင်တံကိုဟနေသော အေးမပါးစပ်ထဲသို့လာထိုးထည့်ပါသည်။ လိင်တံပါးစပ်တွင်း ရောက်သည်နှင့်လိင်တံ အတွင်းမှလရည်များသည်အေးမ၏ အာခေါင်ထိတိုင်ပန်းထွက်လာပါသည်။ အေးမလည်း သူ့ကိုသောက်ခိုင်းမှန်းသိသဖြင့် မြိုချလိုက်ပါသည်။ ဒါတောင် ဦးဖိုးအောင်က မပြီးသေးဘဲ အေးမပါးစပ်ထဲမှာပင်သေးပေါက်လိုက်ပြန်ပါသေးသည်။ အေးမသည်ညှီဆို့ဆို့ အနံ့ကိုခံရင်း အနံ့ရောအရသာပါ ဆိုးလှသည့် ဦးဖိုးအောင်၏ သေးများကိုသောက်သုံးလိုက်ရပါသည်။
သေးပေါက်ပြီးသွားပေမယ့် ဦးဖိုးအောင်သည် သူ၏လိင်တံကိုအေးမပါးစပ်ထဲမှမထုတ်သေးပါ။ အေးမအား စုပ်ခိုင်းထားပြီး သူကအရသာ ခံနေပါသေးသည်။ ဘယ်တုန်းထဲက ဆာနေသည့်လီးမှန်းမသိပေ အေးမစုပ်ပေးနေရင်းပင် ထိုးထောင်၍ပြန်လည်ကြီးမား လာပါသည်။ အေးမမှာတော့ အပျိုစင်ဘဝ နိဂုံးချုပ်သွားရပြီဖြစ်သည်။ ကြမ်းတမ်းလှသော အပျိုရည်ဖျက်မွုကြောင့် လည်း အဖုတ်တခုလုံး နာကျင်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဦးဖိုးအောင်ခိုင်းသမျှကို ဆက်လုပ်ပေးနေရပါသည်။ အေးမတစ်ကိုယ်လုံးလည်း သေးနံ့၊အဖုတ်နံ့၊လရည်နံ့များဖြင့်သင်းကြိုင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ လိင်တံပြန်လည် ထိုးထောင်လာပြီမို့ အေးမပါးစပ်ထဲမှ ပြန်လည်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါသည်။ ဒီတခါမှာတော့ အေးမကို လေးဘက်မထောက်ခိုင်းတော့ဘဲ ဖင်ကုန်းခိုင်းပါသည်။ အားလျော့၍ မထချင်သော်လည်း မထလျှင် အသားနာမည်ကို ကြိုသိနေသဖြင့် ဖင်ကုန်းပေးလိုက်ပါသည်။ ဖင်ကုန်း၍ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို နည်းနည်း ကျယ်ကျယ်ဟပေးထားရပါသည်။ ဦးဖိုးအောင်သည်သူ့စိတ်ကြိုက်အနေအထားရပြီဖြစ်သဖြင့် အေးမကိုဒုတိယ အကြိမ်ထပ်မံလိုးပြန်ပါတော့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ပြီးဆုံးသွားချိန်တွင်တော့အေးမတယောက်ပစ်လဲကျသွားပါတော့သည်။ ဦးဖိုးအောင်သည် ဒီတခါတော့ အေးမဖင်ပေါ်တွင်ပင်လရည်များကို ပန်းထုတ်လိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် ဦးဖိုးအောင်ခဏအနားယူ ပါသည်။ အနားယူပြီးချိန်တွင်တော့ အေးမအိပ်နေရာအခန်းတွင်းမှ ဦးဖိုးအောင်ထွက်သွားပါတော့သည်။ အဖြစ် အပျက်အစအဆုံးကို အမှတ်မထင် မြင်မိလိုက်သော ညိုမသည် အဖုတ်အတွင်းမှ ယားကျိကျိဖြစ်လာပြီး သူမ လက်ဖြင့်သူမ အသာဒေါင့်ကပ်၍ အာသာဖြေနေပါတော့သည်။ ညိုမသည် အချိန်ရှိတိုင်း ဦးဖိုးအောင်၏လီးကြီးကိုသာ မြင်ယောင်နေပါတော့သည်။ ဦးဖိုးအောင်ကတော့ ညိုမထိုသို့ဖြစ်နေသည်ကိုတစွန်းတစိမျှပင်မရိပ်မိနိုင်ခဲ့ပေ။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် အေးမတို့အိမ်သို့ ဒေါ်လှလွန်းသူ၏ တူတယောက် ရောက်ရှိလာပါသည်။ အိမ်သို့ရောက်သည်နှင့် ဖြိုးဝေသည်သူ့အတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေသော အေးမကိုတစိုက်မတ်မတ်လိုက်ကြည့် ပါတော့သည်။ အိမ်ရှိအခြားလူများနှင့်သူရင်းနှီးသော်လည်း အေးမကတော့သူ့အတွက်သူစိမ်းတယောက်ဖြစ်နေ ပါသည်။ ဧည့်သည်ရောက်နေချိန်ဖြစ်သဖြင့်အေးမလည်း အဝတ်အစားများကို ပြန်ဝတ်ခွင့်ရထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ထိုလာသောဧည့်သည်ကို အေးမအလွန် ကျေးဇူးတင်နေမိပါသည်။ သို့တိုင်အောင် အပေါ် အဝတ်အစားများ ဝတ်ခွင့်ရခြင်းသာဖြစ်ပြီး အတွင်းခံများကိုတော့ပေးဝတ်ခြင်းမပြုထားပါ။
အေးမရဲ့တလွုပ် လွုပ် အိုးလေးနှင့် လျှက်ခနဲ၊ လျှက်ခနဲမြင်ရတတ်သော အကာအကွယ်မပါသည့် ရင်သားများကို ဖြိုးဝေအလွန် သဘောကျနေပါသည်။ ဖြိုးဝေ သတိထားမိတာကတော့ သူ့အဒေါ်ရေချိုးသည့်အခါတိုင်း အေးမကို ဘာလို့ရေချိုး ခန်းထဲ ခေါ်ထားရလဲ ဆိုတာပင်ဖြစ်သည်။ ဦးဖိုးအောင်ကလည်း ညဖက်မှသာလွုပ်ရှားသူမို့မသိနိုင်ပေ၊ ညိုမကလည်း အေးမကိုအခန်းအတွင်းတွင်သာ အနိုင်ကျင့်တာကြောင့် ဖြိုးဝေတယောက် သတိမထားမိချေ။ ဖြိုးဝေဒီအိမ်ရောက်တာ တပတ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ အခုထိဒီအိမ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမသိသေးပေ။သို့သော်အေးမကိုသူတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေသဖြင့်အေးမကို တော့ မျက်ချည်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါတော့သည်။ သူမဂရုမထားတာဆိုလို့ ညိုမကခေါ်လို့ အေးမအပေါ်ထပ် ခလေးအခန်းသို့သွားသည့်အချိန်သာရှိသည်။ သို့သော်ထိုအချိန်အများစုသည်သူ့အတွက်အခွင့်ကောင်းများ ဖြစ်နေသည်ကိုမူတပတ်ပြည့်သည်အထိ သူမသိရှိသေးပါ။ အပေါ်ထပ်တွင်ညိုမသည်ခလေးသေးတည်သည့်အခါတိုင်း အေးမပါးစပ်ကိုသာ အသုံးများသည်၊ ညိုမအပေါ်ထပ်မှလှမ်းခေါ်ပြီဆိုအေးမသိလိုက်သည်။ အခန်းထဲရောက်သည်နှင့်ခုတင်အောက်တွင်ဒူးထောက်၍ သူမ၏ပါးစပ်ကိုကျယ်ကျယ်ဟပေးထားလိုက်သည်၊ ညိုမက “ရွုးရွုး”အခုပြုကာ ကလေးကိုသေးတည်ပေးပါသည်။ မျက်နှာတွင် လာစင်သောသေးများကို အေးမလျှော်စရာ အနှီးညစ်များဖြင့်သာသုတ်ပြီး ကလေးချီးဝတ်၊ သေးဝတ်များကိုယူ၍ အောက်ထပ်သို့ ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ဖြိုးဝေကတော့ အဝတ်သွားယူသည်ဟုသာ သိထားသဖြင့် လိုက်မချောင်းမိလိုက်ချေ။ ဖြိုးဝေသည်အေးမ၏လွုပ်ရှားမွု့တိုင်းကို လိုက်ကြည့်နေသဖြင့် အေးမ၏ တချက်တချက်လျှက်ခနဲ ပေါ်သွားတတ်သောရင်သားနှင့်တခါတရံ အောက်စလွတ်နေသည်များကိုတော့သူတွေ့ ဖူးပါသည်။ အောက်စ လွတ်သွားသည်နှင့် အေးမသည်အဖုတ်ကိုပြနေသလို ဖြစ်သွားပါသည်။ အေးမအတွင်းခံများ မဝတ်တာကိုလည်း ဖြိုးဝေက သိနေပြီဖြစ်သည်၊ ထိုသို့အတွင်းခံမဝတ်ခြင်းကိုပင်သူသဘောကျနေပြီး ဝတ်မှာကိုပင် စိုးရိမ်နေပါသည်။ သို့သော်အေးမတွင်အတွင်းခံဝတ်ခွင့်မရှိသည်ကိုတော့သူလုံးဝမသိရှိပါ။ ဖြိုးဝေသည်အေးမအား စိတ်ဝင်စားကြောင်းကို ဖွင့်ပြောလိုက်ပါသည်။
နေ့လည်ပိုင်းအိမ်တွင်လူကြီးများမရှိဘဲ အေးမ၊ ညိုမနှင့်ကလေးသာ ရှိသော အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ အေးမသည်ရေချိုးခန်းထဲတွင်အဝတ်လျှော်နေချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ဖြိုးဝေသည်အေးမအနားကိုရောက်လာ ပြီး အေးမကိုသူဘယ်လောက် ချစ်ကြောင်းများကို ဒရဆက်ပြောပါသည်။ အေးမကလက်မခံနိုင်ကြောင်း ငြင်းပါ သည်။ ဖြိုးဝေသည်အေးမက အမျိုးမျိုးငြင်းနေသဖြင့်အကြပ်ရိုက်နေပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်တော့မကောင်းသော အကြံတခုကိုသူကြံစည်ပြုလုပ်လိုက်ပါသည်။ သူဘယ်လောက်ပြောပြော ငြင်းနေသော အေးမသည် ရေချိုးခန်းအတွင်းတွင် အဝတ်လျှော်လျက် ရှိနေ ပါသည်။ ဖြိုးဝေသည်ဘာမှပြောညာမပြောနှင့်ရေချိုးခန်းထဲဝင်လာပြီး အေးမပါးစပ်ကိုသူ့လက်ဝါးဖြင့်ဖမ်းပိတ်ကာ ရေချိုးခန်းတံခါးကို လော့ချလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက်အေးမအား နံရံဘက်သို့အတင်းကပ်ခါ အေးမဝတ်ထားသော အဝတ်များအား အတင်းဆွဲဖယ်၍ အေးမအဖုတ်အားစတင်ကာ ကာမစပ်ယှက်ပါတော့သည်။ ဖြိုးဝေ၏ဒုတ်သည်ဦးဖိုးအောင်လောက်မကြီးသော်လည်း အတင်းအကြပ်ကာမစပ်ယှက်ခြင်း ဖြစ်သော ကြောင့်အေးမအလွန်နာကျင်ခဲ့ရပါသည်။ အေးမအား တချီပြီးသည်အထိလိုးပြီးနောက်အေးမအားအသံမထွက်ရန် ခြိမ်းခြောက်ကာ ပါးစပ်အားဖုံးထားသောလက်ကို ဖယ်ပေးပါသည်။ အေးမလည်းအသံမထွက်ဘဲ နာကျင်မွု့ကို တဟင့်ဟင့်နှင့်ခံစားနေရပါသည်။ “ အေးမရယ်ကိုယ်က အေးမကိုချစ်လို့ပါ…မငိုနဲ့တော့နော်တိတ်တိတ်” အေးမက တဟင့်ဟင့်ဖြစ်နေသဖြင့် ဖြိုးဝေကဘေးမှနေ၍ လေသံအေးလေးဖြင့် နှစ်သိမ့်ပေးနေပါသည်။ ထို့နောက်ဖြိုးဝေက အေးမပုခုံးကိုကိုင်၍ သူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ အေးမခန္ဓာကိုယ်လေးကို ဆွဲသွင်းလိုက်ပါသည်။ အေးမ လည်း အလိုက်သင့် နေပေးလိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အေးမနှင့်ဖြိုးဝေတို့သည် ရည်းစား(သို့)ချစ်သူ ဘဝ ရောက်ခဲ့ကြပါတော့သည်။ သို့သော်ဧည့်သည်ဖြစ်သော ဖြိုးဝေသည်အချိန်တန်အိမ်ပြန်ရမည်မှာ ဓမ္မတာတာပင် ဖြစ်ပါသည်။
သို့တိုင်အောင် ဖြိုးဝေသည် အေးမတို့၏ အိမ်တွင်းရေး အခြေအနေများကို လုံးဝသိရှိသေးခြင်း မရှိဘဲ၊ လူလစ်ခိုက်များတွင်သာ သူတို့နှစ်ဦး စကားစမြည်ပြော၊ ဟိုလုပ်ဒီလုပ် လုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြိုးဝေသည် အိမ်ပြန်ရန် အချိန်အခါ ရောက်နေပြီမို့ အိမ်ပြန်ရန် ပြင်ဆင်ပါတော့သည်။ အေးမကိုသူမခွဲလိုပါ၊ ထို့ကြောင့် အေးမနှင့်သူ့အကြောင်းကို အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်လှလွန်းသူအား ဖွင့်ပြောကာ အေးမကိုသူနှင့်အတူ ခေါ်သွားရန် ကြံစည်နေမိပါသည်။ အခုလည်း အဒေါ်ဖြစ်သူထံတွင်အေးမကိုသူနှင့်အတူလိုက်ပါခွင့်ပြုပါရန်တောင်းဆိုဖို့ရာ ဒေါ်လှလွန်းသူ အခန်းသို့ဖြိုးဝေလာခဲ့ပါသည်။ အခန်းဝသို့အရောက်တွင်ဒေါ်လှလွန်းသူသည်ကုတင်ပေါ်တွင်အိပ်စက်နေချိန်ဖြစ် ပါသည်။တခါတရံမှအားရက်ရသည်မို့ရသောအားရက်တွင်အပြည့်အဝအိပ်စက်ခြင်းဖြင့်အနားယူနေခြင်းဖြစ်သည်။ အခန်းတံခါးက လော့မချထားသည်မို့အဒေါ်ဖြစ်သူကိုစကားပြောရန်အတွက်ဖြိုးဝေအခန်းအတွင်းသို့ဝင်ခဲ့ပါသည်။ အခန်းထဲရှိကုတင်ပေါ်မှ အဒေါ်ဖြစ်သူကို တွေ့ချိန်တွင်တော့ ဖြိုးဝေစိတ်ထဲတွင်မယိုးမရွ ဖြစ်သွားပါသည်။ လှည့်ဘဲထွက်ရတော့မလို၊ ဒီအတိုင်းဘဲ ဆက်ကြည့်နေရတော့မလို ဖြစ်သွားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ဒေါ်လှလွန်းသူဝတ်ထားသော ထဘီသည်ဖြေလျော့၍ထဘီအောက်စသည်ခါးအနီးသို့ပင်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ဖြိုးဝေအနီးသို့ဖြည်းဖြည်းချင်း ကပ်သွားလိုက်ပါသည်။ ဒေါ်လှလွန်းသူကတော့အိပ်မောကျနေချိန်မို့ဘာဆိုဘာမှမသိပါ။ ဖြိုးဝေသည်လည်း အတွင်းစိတ်ကိုမချိုးနှိ မ်နိုင်တော့ဘဲ အဒေါ်ဖြစ်သူ၏ ပစ္စည်းအပေါ်တွင်ပင်အာရုံရောက်နေပါတော့သည်။
ပျိုဆဲနုဆဲဖြစ်သည့် လှပသည့် အဖုတ်လေးကလည်း ဖြိုးဝေကို လက်ယက် ခေါ်နေသယောင်ပင်။ ဖြိုးဝေကုတင်နားကပ်၍ ကုတင်အောက် ဘက်နားလောက်တွင်ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး အဒေါ်ဖြစ်သူ၏ ပေါ်နေသော အဖုတ်လေးကို အရသာခံ၍ ရွုစား နေပါသည်။ ပြီးနောက်အဖုတ်နားသို့ ခေါင်းတိုး၍ အဖုတ်အား အနံ့ခံလိုက်ပါသည်။ အနံ့ခံနေရင်းမှ သူ၏လျှာဖြင့် ဖင် နှစ်ခုကြားမှ အဖုတ်လေးကို လှမ်းလျက်လိုက်ပါသည်။ ဒေါ်လှလွန်းသူက ဘေးစောင်းအိပ်နေပြီး ဖြိုးဝေသည် ဖင်ပေးထားတာ ဘက်တွင်ဒူးထောက်ထိုင်၍ နေရာယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်လှလွန်းသူသည်အိပ်မောကျနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အခန်းဝတွင်တော့ညိုမသည်ဖြစ်စဉ်တရပ်လုံးကို ငြိမ်၍ကြည့်နေပါသည်။ ဖြိုးဝေလည်း သူ့အာရုံနဲ့သူမို့ အခန်းတံခါးဘက်ကို ဂရုမစိုက်မိလိုက်ချေ။ ဖြိုးဝေသည် ဒေါ်လှလွန်းသူ၏ အဖုတ်နှင့်ဖင်လုံးများကို သူ၏လျှာဖြင့် မနားတမ်းလျက်နေပါသည်။ တချက်တချက်အဖုတ်ထဲထိအောင်လျှာကို ထိုးထည့်ပါသည်။ဖြိုးဝေတဆင့်ထပ်တတ်၍အဖုတ်အားသူ့ညီလေးဖြင့်စပ်ယှက်ရန်သူ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်လျှောကျ လိုက်ပါတော့သည်။ တိုက်ပွဲဝင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော ဖြိုးဝေညီလေးသည်မတ်ထောင်၍ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုအချိန် တွင်တော့ အသံမပေးဘဲ ကြည့်နေသော ညိုမဆီမှ အသံထွက်ပေါ် လာပါတော့သည်။ ထိုအသံသည်မလုပ်ရန် ကန့်ကွက်သော အသံပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြိုးဝေသည်ညိုမကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့် ကြောက်လန့်ပြီး လုပ်လက်စများကို ရပ်တန့်၍ အခန်းတွင်းမှပြေးထွက်ရန်ကြံလိုက်ပါသည်။ သို့သော်မပြေးထွက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ညိုမ၏ပြန်တိုင်လိုက်ရမလား ဆိုသောစကားကြောင့်ဖြိုးဝေတယောက်ညိုမလက်အောက်ရောက်ခဲ့ရပါတော့သည်။ ဖြိုးဝေသည်သူတခါမှပင်စိတ်ကူးမယဉ်ခဲ့ဖူးသော ဘဝသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ညိုမသည်သူ၏မျက်နှာ ပေါ်တွင် ခွထိုင်နေပြီး သူ၏နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ပေါက်များအား အဖုတ်၊ဖင်တို့ဖြင့် ဖိထားပါသည်။ အသက် ရွုရန် အနည်းငယ်လောက်ပင် ကြွကြွပေးပါသည်။ ခုတင်ပေါ်မှာမို့ အောက်ခြေက မွေ့ယာခံနေသော်လည်း အပေါ်မှာ ဖိထားသဖြင့်အသက်မနဲ ရွုနေရပါသည်။ သူ၏ဗိုက်ပေါ်တွင်တော့ခလေးကိုလဲပြီး သိပ်ထားပါသည်။
ကလေးလည်း အိပ်သွားပြီဖို့ အညောင်းအညာဖြေရန်ညိုမထလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက်အခန်းတံခါးဖွင့်၍ အောက်ထပ်သို့ ဆင်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ထုံးစံအတိုင်း အခန်းတံခါးကိုတော့ ပိတ်မထားခဲ့ပါ။ ဖြိုးဝေသည်ညိုမ သူ့ကိုမိသွားချိန်မှစ၍အခုအချိန်ထိညိုမနှင့်ပင်အတူရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။အခုဆိုလျှင်တညပင်ကုန်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ နောက်နှစ်ရက်လောက်နေရင်သူဇာတိမြေကို ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အေးမကိုခေါ်ဖို့ကိစ္စကိုတော့ ဒေါ်လှလွန်းသူထံတွင် ခွင့်မတောင်းရသေးပေ။ ဖြိုးဝေနောက် နှစ်ရက်နေရင် ပြန်မည့်ကိစ္စကို ညိုမလည်းသိသည်။ သို့သော်ဝင်လာသော အခွင့်အရေးကို ညိုမသည်အသုံးချ လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အေးမတယောက်ဖြိုးဝေကို မတွေ့မိသဖြင့် ဘယ်များရောက်နေသလဲဟု တွေးနေမိပါသည်။ ထို့သို့တွေးရင်းနဲ့ပင်အိမ်မွုကိစ္စများကိုလုပ်ကိုင်နေပါသည်။ “ ဟဲ့အေးမ ခလေးအဝတ်တွေ လာယူအုန်း ” အိမ်သာအထွက်လာသော ညိုမသည်အေးမကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါသည်။ “ ဟုတ်ကဲ့လာယူပါ့မယ်” ညိုမလည်း ပြောပြီးသည်နှင့်အပေါ်ထပ်သို့ပြန်တတ်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်ခုတင်ပေါ်တတ်၍ ဖြိုးဝေ မျက်နှာ ပေါ်သို့ခွလိုက်ပြီး ဖြိုးဝေမျက်နှာကိုအပေါ်စီးက ငုံ့ကြည့်လိုက်ပါသည်။ “ဟဲ့တဏှာကောင်ငါခုနအိမ်သာသွားတတ်တာဖင်ရော၊အဖုတ်ရောရေမဆေးလာခဲ့ဘူးနင်ယက်ပေးရမယ်” ညိုမသည်အပေါ်စီးမှ ကြည့်၍ပြောရင်း သူမ၏ဝတ်ထားသော ဘောင်းဘီတိုကိုချွတ်ချလိုက်၍ ဘေးတွင် ထားလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက်ဖြိုးဝေ၏ မျက်နှာပေါ်သို့ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပါသည်။ “ ဟဲ့တဏှာကောင်ဘာလုပ်နေတာလဲ ယက်လေ ” ဖြိုးဝေက ကြောင်တောင်တောင်လုပ်နေသဖြင့် ညိုမက ယက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါသည်။
ဖြိုးဝေလည်း ညိုမ၏ အမိန့်အတိုင်းပင်လိုက်နာလိုက်ပါသည်။ ထိုတိုင်အောင်ခလေးသည်ဖြိုးဝေ၏ဗိုက်ပေါ်တွင်အိပ်နေမြဲဖြစ် သည်။ ရေမဆေးခဲ့သော်လည်း အိမ်သာထဲက အထွက်တွင်ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်လိုက်သောကြောင့်အနံ့သာကျန်ပြီ အရသာတို့သည်ဘောင်းဘီထဲတွင်ကျန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ချီးနံ့သေးနံ့ရနေသေးသောအဖုတ်ကိုဖြိုးဝေသည်မနဲယက်ပေးနေရပါသည်။ ညိုမကလည်း ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ အရသာခံနေပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်အခန်းတံခါးဖွင့်၍ အခန်းထဲသို့ အေးမရောက်ရှိလာပါ သည်။ အေးမသည်ကိုယ့်မျက်လုံးကိုပင်ကိုယ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားပါသည်။ ညိုမသည်ဝတ်လစ်စလစ် ဖြစ်နေသော ယောင်္ကျားလေးတယောက် မျက်နှာပေါ်တွင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ ခလေးကို ထိုဝတ်လစ်စလစ်၏ ဗိုက်ပေါ်တွင်တင်သိပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ အေးမအဝတ်တွေ လာယူလေ အခန်းဝမှာရပ်ပြီး ဘာကြောင်ကြည့်နေတာလဲ ” “ ဟို..ဟို.. ” အေးမသည်ညိုမအောက်ရှိအရာကိုလက်ညိုးထိုး၍ တဟိုဟိုဖြစ်နေပါသည်။ “ အော်ဒါလား ဒါငါရဲ့ကျွန်အသစ်လေးလေ ” ဟုဆိုရင်း ညိုမသည်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရာမှ ထလိုက်ပါ သည်။ ထိုအချိန်တွင်တော့အောက်မှပေါ်လာသော မျက်နှာသည်အေးမအားပို၍ပင်အံ့အားသင့်စေပါတော့သည်။ ဖြိုးဝေသည်လည်း သူ၏ချစ်သူလေးရှေ့တွင် အခုကဲ့သို့ ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်သဖြင့် မျက်နှာတွင် ရှက်ရွံ့စိုးရိမ်မွုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ “ ကိုဖြိုးဝေ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဟင်… ” အေးမသည်သိချင်စိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ လှမ်းမေးလိုက်ပါတော့သည်။ အေးမ၏အမေးကို ဖြိုးဝေက ပြောရန်စွံ့အနေသော်လည်း ညိုမမှဖြည့်စွတ်၍ ဝင်ရောက်အဖြေပေးလိုက်ပါသည်။ “ ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ အေးမရယ်၊ ဒီတဏှာကောင်ပေါ့၊ ဒေါ်လေးကိုမုဒိန်းကျင့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လေ၊ ဒါကို ငါကတွေ့လို့ဒင်းကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပညာပေးနေတာ ” အေးမစိတ်ထဲတွင်တော့“ကိုဖြိုးဝေရယ်ရှင်ဟာလေတော်တော်ဆိုးတဲ့လူပါလား ”အေးမစိတ်ထဲတော်တော် လေးကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိနေပါသည်။
သူရဲ့ချစ်သူက အဒေါ်အရင်း တယောက်လုံးကိုပင် ထို့သို့ပြုရလောက် အောင်ယုတ်မာလိမ့်မည်ဟုအေးမဘယ်တုန်းအခါမှမထင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အေးမစိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြင့်အဝတ်တောင်းကိုယူကာ အိမ်ထပ်လို့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ အေးမရင်ထဲအတေ်ာလေးကိုခံစားနေရပါသည်။ လျှော်စရာအဝတ်များကိုလျှော်ရင်း အေးမမျက်ရည်များဖြင့် ခံစားနေပါတော့သည်။အပေါ်ထပ်မှညိုမသည်လည်းဖြိုးဝေကိုခွထိုင်၍လျက်ပေးသည့်အရသာကိုခံစားနေပါသည်။ ညိုမသည်အချိန်အတော်ကြာသည်အထိအလျက်ခံပြီးနောက်တခြားတခုကို ပြောင်းခိုင်းရန်အတွက်ခလေးကို ပုခက်ထဲသို့မချီ၍ပို့လိုက်ပါသည်။ “ ဟဲ့တဏှာကောင်ခုတင်ပေါ်က ဆင်းပြီးလေးဘက်ထောက်စမ်း ” ဖြိုးဝေ၏လေးဘက်ထောက်ထားသောကျောကုန်းပေါ်တွင်ညိုမခွထိုင်ကာအခန်းတွင်းပတ်စီးပါတော့သည်။ “ အခန်းထဲမှာ ချည်းဆိုတော့ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်၊ အပြင်ထွက်ရအောင်” သူမက ကျောအထက်မှာနေ၍ ဖြိုးဝေအား အမိန့်ပေးပါသည်။ ဖြိုးဝေလည်း အမိန့်ပေးသည့်အတိုင်းပင် အခန်းတံခါးပေါက်မှထွက်လာခဲ့ပါသည်။ လှေကားနားအရောက်တွင်တော့ညိုမသည်ကျောပေါ်မှဆင်း၍ ဖြိုးဝေကို တော့လေးဘက်ထောက်လျက်ပင်နောက်ကလိုက်ဆင်း စေခဲ့ပါသည်။ အေးမသည်အပေါ်ထပ်မှဆင်းလာသော ညိုမ၏အသံကိုကြားသဖြင့်ကျနေသော ပါးပြင်ရှိမျက်ရည်များကို လက်ဖြင့်သုတ်လိုက်ပါသည်။ညိုမသည်အေးမအဝတ်လျှော်နေရာရေချိုးခန်းသို့ဖြိုးဝေကိုစီး၍ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ “ အေးမ ငါ့စီးတော်မြင်းကြီး မမိုက်ဘူးလားဟ ” အေးမသည်အပြုံးနဲ့ပင်ပြန်အဖြေပေးလိုက်ပါသည်။ “ အေးမ ညည်းအဝတ်တွေ လျှော်ပြီးရင်ငါ့ဆီလာခဲ့အုန်း ” “ ဟုတ်ကဲ့ ” ညိုမသည် သူပြောချင်တာ ပြောပြီးနောက် ဖြိုးဝေကိုစီး၍ အိမ်ထဲတွင် လှည့်လည်ပါတော့သည်။ ဖြိုးဝေ ခမျာမှာလည်း အငြင်းနိုင်သော အခြေအနေမို့ ဆက်လက်၍ ခိုင်းသမျှ လုပ်ပေးနေရပါသည်။ အေးမအလုပ်များ လက်စသတ်ပြီးပြီမို့ ညိုမရှိရာဆီကို လာခဲ့ပါသည်။ အခုအချိန်တွင်တော့ ညိုမသည် အပေါ်ထပ်အခန်းထဲသို့ပြန် ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
ကုတင်ပေါ်တွင်ခြေထောက်ချပေးထားသော ညိုမ၏ခြေချောင်းများကို ဖြိုးဝေက စုပ်ပေး လျက်ပေးနေပါသည်။ “ အော်…အေးမ ရောက်ပြီလား လာလေ…ဒီကို ” ညိုမကခေါ်သဖြင့်ကုတင်နားသို့ အေးမသွားလိုက်ပါသည်။ ဖြိုးဝေကအေးမကို အနည်းငယ်မျက်လုံးပင့်၍ ကြည့်လိုက်ပါသည်။ အေးမလည်း ဖြိုးဝေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါသည်။ “ အေးမ…နင့်အဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပေါ့ဟာ ” အေးမ မချွတ်လိုပါ၊ သို့သော်….. “ ဘာမှရှက်မနေပါနဲ့ဟယ်…ဒီတဏှာကျွန်ကိုဂရုစိုက်မနေနဲ့ငါချွတ်ခိုင်းနေတယ်ချွတ်ဆို ” အေးမလည်း ကိုယ်ပေါ်တွင် တင်တယ်ဆိုရုံဝတ်ထားသော အင်္ကျီနှင့်ထဘီများကို ချွတ်ချလိုက်ပါသည်။ ထိုအခါတွင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သော အေးမ၏ဝတ်လစ်စလစ်အိမ်တွင်းနေထိုင်မွုပုံစံလေးပေါ်လာပါတော့သည်။ ဖြိုးဝေတအံ့တသြဖြစ်သွားပြီးလက်ဖြင့်ကိုင်ထားသောညိုမ၏ခြေထောက်များကိုပင်အောက်သို့ပစ်ချလိုက်မိပါသည်။ “တဏှာကျွန်နင်တော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟုတ်လား၊ငါခြေထောက်ကိုတောင်လွတ်ချလိုက်တယ်၊ ငါ့ခြေထောက်ကိုကိုင်ပြီးပြန်တောင်းပန်စမ်း ” ဖြိုးဝေသည်ထိုမှပင်ပြာပြာသလဲနှင့်…… “ သခင်မ ကျွန်တော်တဏှာကျွန်က တောင်းပန်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါနော်” “ ဒီလောက်နဲ့ဘယ်ရမလဲ.. ငါ့ခြေဖဝါးအောက်နင့်ခေါင်းထားပြီး တောင်းပန်ချည်” ဖြိုးဝေလည်း အင်တင်တင်ဖြင့်ပင်သူ၏ခေါင်းကို ညိုမ၏ခြေဖဝါးအောက်သို့ရောက်ရန်ခေါင်းငုံ့ပြီးကုန်နေ လိုက်ပါသည်။ “ တောင်းပန်ပါတယ်သခင်မ တဏှာကျွန်နောက်အဲ့လိုမဖြစ်စေရပါဘူး…” “ အေး အဲ့လိုမှပေါ့ ” “ ကဲရပြီ….နင်တို့နှစ်ယောက်ကိုငါခိုင်းစရာရှိတယ်” ရပြီဆိုသဖြင့် ဖြိုးဝေခေါင်းကို ခြေဖဝါးအောက်မှ ထွက်လိုက်ပါသည်၊ သို့သော်ဒူးထောက်လျက်ပင်ညိုမ ကိုကြည့်၍ ညိုမပြောမယ့်အမိန့်စကားသံကိုနားထောင်နေပါသည်။ အေးမသည်မတ်တပ်ရပ်လျက်ပင်အနားတွင် ရှိနေပါသည်။ ညိုမသည်ကုတင်ပေါ်တွင်ခြေထောက်ဆင်း၍ ထိုင်နေရာမှအောက်သို့ဆင်းလိုက်ပြီးးး “ တဏှာကျွန်ကုတင်ပေါ်တတ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း လှဲနေစမ်း ” ဖြိုးဝေလည်း ခိုင်းသည့်အတိုင်းပင်ခုတင်ပေါ်တတ်၍ ပါးစပ်ကိုကျယ်ကျယ်ဟကာ လှဲနေလိုက်ပါသည်။ “ အေးမ ညည်းကဒီပေါ်မှာထိုင်” ဟုဆိုကာ အေးမကိုလက်ဆွဲ၍ ကုတင်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီး ဖြိုးဝေ၏ မျက်နှာ ပေါ်တွင်ခွ၍ထိုင်စေပါသည်။
ညိုမက ဆွဲတင်လိုက်သဖြင့်အေးမသည်ဖြိုးဝေ၏ ပါးစပ်ဟထားသောမျက်နှာပေါ်တွင် ပုံလျှက်သား ထိုင်ချလိုက်ပါသည်။ အေးမကိုယ်တွင် အဝတ်များမရှိသဖြင့် ပါးစပ်နှင့်အဖုတ်သည် ဝမ်းဆက်ဖြစ် နေပြီဖြစ်သည်။ အောက်မှဖြိုးဝေသည်အပေါ်မှတတ်ထိုင်ထားသော အေးမ၏ကိုယ်အလေးချိန်ကြောင့်အသက်ပင် မနဲရွူနေရပါတော့သည်။ “ ဟဲ့တဏှာကျွန်… အေးမအဖုတ်ကိုသေချာ စုပ်ပေးလိုက်စမ်း ” ဖြိုးဝေသည်လည်း ညိုမခိုင်းသည့်အတိုင်းကိုပင် အေးမအဖုတ်ကို အသက်မနဲ ရွူနေရသည့်ကြားမှ “တပြွတ်ပြွတ်” နှင့် စုပ်ပေးနေရပါသည်။ ဖြိုးဝေ၏ စုပ်ပေးမွုကိုအေးမသည်ညိုမခိုင်း၍သာခံနေရခြင်းဖြစ်သော်လ ည်း အခုအချိန်တွင်တော့ သူကိုယ်တိုင်ကပင်စိတ်ပါလာပြီဖြစ်သည်။ အေးမစိတ်ပါလာသည်ကို ကြည့်၍ ညိုမက ဘေးမှအားပေးနေပါသည်။ “ဘယ်လိုလဲ ကောင်းတယ်မဟုတ်လား အေးမ ငါလည်းခံဖူးပြီးပြီညည်းလည်းအရသာ တွေ့နေတယ်မဟုတ်လား ” အေးမဘာမှပင်ပြန်မပြောနိုင်ဘဲ ဖြိုးဝေ၏ စွမ်းဆောင်ပေးမွုတွင်သာမိန်းမောနေပါတော့သည်။ညိုမကလည်း မိန်းမသားချင်းသိနေသည်မို့အေးမ၏သာယာနေ၍ကိုအနှောက်အယှက်မပြုဘဲ ဘေးကပင်အရသာခံ၍ ထိုင်ကြည့် နေပါသည်။ အချိန်အတော်ကြာသွားပြီနောက်….. “ ကဲအေးမရေ ဆင်းအုန်းဟဲ့ငါတဏှာကျွန်ကို နောက်ထပ်ခိုင်းစရာတွေ ကျန်သေးတယ်” ဟုဆိုကာ ညိုမ သည်ကုတင်ပေါ်တတ်၍ အေးမအားဆွဲမလိုက်ပါသည်။ အောက်မှစုပ်ပေး၊ လျက်ပေးနေသော ဖြိုးဝေရော အပေါ်မှ အရသာခံနေသော အေးမပါ ‘ပြွတ်’ ခနဲအသံနှင့်အတူအဆက်ပြတ်သွားပါသည်။ အေးမဘယ်နှစ်ခါလောက်အရည် ထွက်သွားသည်တော့မသိဖြိုးဝေပါးစပ်တစ်ပြင်လုံးတွင်တော့အရည်ပျစ်များစိုရွဲနေပါသည်။ “ ဘယ်လိုလဲ အေးမ အရသာ တော်တော်ရှိသွားလား ” အေးမ ဘာမှပြန်မပြော ခေါင်းကြီးငုံ့နေသည်။ “ ဘာလဲ ပြန်မဖြေဘူးလား ပြန်မဖြေရင်ညည်းအဖုတ်ကိုငါနှိုက်မှာနော်” အဖုတ်အနှိုက်ခံရမည်ကိုကြောက်သဖြင့်‘ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်’ဟုအေးမပြန်၍အဖြေပေးလိုက်ရပါသည်။
“ ဒီတခါ တမျိုးပြောင်းမယ်” ဟုဆိုကာ ဖြိုးဝေ၏ ဟနေသော ပါးစပ်ပေါ်သို့ညိုမကဘောင်းဘီချွတ်၍ တခါ တတ်ထိုင်ပြန်ပါသည်။ အေးမကိုတော့ဖြိုးဝေ၏ ညီလေးအားစုပ်ပေးရန်ခိုင်းစေလိုက်ပါသည်။ညိုမသည်အေးမအား မျက်နှာမူထား၍ ဖြိုးဝေ၏ပါးစပ်ဟထားသောမျက်နှာ ပေါ်တွင်ထိုင်ကာ အေးမ ဖြိုးဝေ၏ လိင်တံအားစုပ်ပေးနေပုံကို အရသာခံ၍ကြည့်နေပါသည်။ ထိုအချိန်ထိတိုင်အိပ်နေသောခလေးသည်ပုခက်ထဲတွင်ပင်ရှိနေပြီး မနိုးသေးပါ။ ပြန်ရမည့် ရက်ရောက်ပြီမို့ ဖြိုးဝေလည်း အထုပ်အပိုးများ ပြင်နေပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်ဖြိုးဝေ၏ အခန်း အတွင်းသို့ညိုမရောက်ရှိလာပါသည်။ “ တဏှာကျွန်… နင်ငါမှာတာကိုမမေ့နဲ့နော်.. ” “ ဟုတ်ကဲ့… သခင်မပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပါ့မယ်” ညိုမသည် ဖြိုးဝေအား အကြပ်ကိုင်၍ ဒီအိမ်သို့ပြန်လာရန် ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးနောက် ညိုမသည် အထုပ်အပိုးပြင်နေသောဖြိုးဝေအနားသို့သွားကာဖြိုးဝေအားလက်မောင်းမှဆွဲ၍ခုတင်ပေါ်တွင်လှဲစေလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက်ထုံးစံအတိုင်းပင်ဖြိုးဝေအား ပါးစပ်ဟခိုင်း၍သူမကဘောင်းဘီအနည်းငယ်ချွတ်၍ မျက်နှာပေါ်မှခွထိုင်ကာ သေးပေါက်ပါတော့သည်။ “ ဒါက နင့်အတွက်အိမ်အပြန်လက်ဆောင်ဘဲ တဏှာကျွန်… နင်ကြိုက်ရဲ့လားးး ” ဖြိုးဝေဘာမျှမပြောပါ ညိုမပေါက်ချလိုက်သော သေးများကိုသာ အလျင်မီအောင်မဖိတ်စေဘဲ လိုက်သောက် ပေးနေပါသည်။ထိုသည်ကပင်ညိုမပေးသောအိမ်ပြန်လက်ဆောင်ကိုဖြိုးဝေကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းသိသာထင်ရှား နေပါတော့သည်။ ထို့နောက်ဖြိုးဝေသည်အောက်ထပ်ရှိအေးမ ဆီသို့ရောက်လာပြီး ခြံထဲတွင်အဝတ်လှမ်းနေသော အေးမ ခြေထောက်အောက်ဒူးထောက်လိုက်၍ အေးမခြေချောင်းများကို လျှာဖြင့်အလျင်လျက်လိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် ခေါင်းမော့၍…… “ ကျွန်တော်တဏှာကျွန်သွားပါတော့မယ်ခင်ဗျာ ” ဟုပြောလိုက်ပါသည်။ အေးမလည်း အပြုံးဖြင့်ပင်ပြန် အဖြေပေး ခေါင်းညိမ့်လိုက်ပါသည်။ ညိုမကတော့ အနောက်မှနေ၍ တောက်လျှောက်ကြည့်နေပါသည်။ ခလေးကို ချီလျက်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ အေးမရင်ထဲရှိဖြိုးဝေအပေါ်ထားသောခံစားချက်တို့သည်လွန်ခဲ့သောတစ်ရက်ကျော်ကပင်ပြောင်းလဲသွားပြီ ဖြစ်တာကြောင့် အခုအချိန်တွင်တော့ အေးမသည် ဖြိုးဝေနှင့်ပက်သက်၍ အလွမ်းအဆွေးတို့ မရှိနိုင်တော့ပြီဖြစ် သည်။ အေးမသည်ဒီအိမ်နှင့်လွတ်ရာ လွတ်လမ်းကိုရနိုင်ပြီဟုတချိန်က ထင်ခဲ့မိသော်လည်း အခုအချိန်တွင်တော့ ဒါတွေအားလုံးသည်အိမ်မက်ပမာပင်ဖြစ်သည်။
အခုအချိန်တွင်တော့အေးမသည်သူမ၏အခန်းအတွင်းတွင်ပင်ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့်လေးဘက်လေးထောက် ကာ အန်ကိုကြိတ်လျက် အနောက်မှ ဦးဖိုးမောင်ပေးသော အရသာတစ်လုံးတစ်ခဲကြီးကို ခံစားနေရပါသည်။ တစ်လုံးတစ်ခဲကြီးဟုဆိုရခြင်းမှာ ဦးဖိုးအောင်သည်သူ၏ကြီးမားသော လိင်တံကို အေးမ၏ဖင်ပေါက်လေးအတွင်း သို့အတင်းသွပ်သွင်း၍ သူ၏လက်များကို အေးမ အဖုတ်အတွင်းသို့ထည့်ကာ ထိုးသွင်းမွေနှောက်နေခြင်းကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။ အေးမခမျာ အသံလည်းထွက်ခွင့်မရှိသည်မို့အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ကာ နာကျင်မွုကိုခံစားနေရပါသည်။ ထိုသည်ကိုချောင်းကြည့်၍ သရေကျနေသူကတော့ထုံးစံအတိုင်း ညိုမပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။ ထူးထူးခြားခြားပင်နေ့လယ်နေ့ခင်း အိမ်ပြန်လာလေ့မရှိသော ဒေါ်လှလွန်းသူသည်အိမ်အတွင်းသို့အလော သုံးဆယ်နှင့် ဝင်လာပါသည်။ အေးမလည်း အိမ်ရှေ့ဘက်မှ အသံကြားသဖြင့်တံခါးခေါက်သံကြားသဖြင့်တံခါး သွားဖွင့်ပေးလိုက်ပါသည်။ ခြံတံခါးသော့ကတော့ ဒေါ်လှလွန်းသူကိုယ်တိုင်ဖွင့်၍ဝင်လာသည်မို့ အေးမ မသိလိုက် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အေးမကိုစကားတခွန်းမျှပင်မပြောဘဲ အေးမ ဖွင့်ပေးသော တံခါးမှဝင်ကာ အပေါ်ထပ်သို့အလျင် အမြန်တက်သွားပါသည်။ သိပ်မကြာလိုက်ပါ၊ ခရီးဆောင်အိတ်ကိုကိုင်၍ ဒေါ်လှလွန်းသူပြန်ဆင်းလာပါသည်။ “ အေးမရေ ဒီမှာတံခါး လာပိတ်အုန်း ” အေးမလည်း ရေချိုးခန်းအတွင်း အဝတ်လျှော်နေရာမှ ထပ်မံထွက်လာပြီး တံခါးပိတ်ရန်ပြင်လိုက်လာခဲ့ပါ သည်။ “ အေးမ ငါကိုဘယ်သူလာမေးမေး မသိဘူးလို့ဖြေလိုက်နော်ဘယ်အချိန်ပြန်လာမလဲ မေးရင်လည်း မသိဘူး ဘဲဖြေလိုက်…ကိုဖိုးမောင်မေးရင်တော့ အထက်မြန်မာ ပြည်ဘုရားဖူးကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ထွက်သွားတယ်လို့ ဖြေလိုက်ကြားလား ညိုမကိုလည်း ငါခရီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ကြားလား ဒင်းကအခုခလေးနဲ့ အတူအိပ်ပျော်နေလောက်တယ်” ‘‘ဟုတ်ကဲ့… ” “ အေး ပြီးရော တံခါးပိတ်တော့ငါမှာတာတွေ မမေ့နဲ့နော်… ” “ ဟုတ်ကဲ့.. ဟုတ်ကဲ့… ” အေးမလည်း ဒေါ်လှလွန်းသူ မှာသည့်အတိုင်းပင်မှတ်၍ ရေချိုးခန်းအတွင်း ပြန်ဝင်ကာ အဝတ်ပြန်လျှော် နေလိုက်ပါသည်။
အခုအချိန်တွင်တော့အိမ်တွင်လည်း ဧည့်သည်မရှိသည်မို့အေးမကိုယ်တွင်အဝတ်အစား တစွန်း တစပင်မရှိပေ။ ဒေါ်လှလွန်းသူမှာသမျှစကားများကို အေးမသည်ညိုမနိုးလာချိန်လောက်ကိုမှန်း၍ သွားပြောလိုက်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောနေခိုက်တွင် ခြံရှေ့မှလူခေါ်ခေါင်းလောင်းသံကို ကြားလိုက်ရပါသည်။ ခြံရှေ့တွင်လူခေါ်ခေါင်း လောင်း သံကြားသဖြင့်အကျိုးအကြောင်းသိဖို့သွားရန်အေးမသည်ညိုမနှင့်ခလေးနေသော အခန်းထဲရှိညိုမ အဝတ်အစား များကိုပင်ဝတ်၍ ခြံရှေ့သို့အပြေးအလွား သွားလိုက်ပါသည်။ “ ခလေးမ တံခါးဖွင့်ပါ ” “ ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲ မသိဘူး ” “ အထဲရောက်မှပြောမယ်အခုတံခါးဖွင့်” အသံမာမာဖြင့်ဟောက်လိုက်သော ရဲကြီး၏အသံကြောင့်အေးမလန့်သွားပြီး တုန်ရီသောလက်များဖြင့် ခြံ တံခါးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါသည်။ “ ခလေးမ အိမ်ထဲမှာ ဒေါ်လှလွန်းသူရှိလားး ” ရပ်ကွက်လူကြီး၏ အမေးစကားကို ‘မရှိဘူး’ ဟုပင်ချက်ချင်းပြန်အဖြေပေးလိုက်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ရဲများနှင့်ရပ်ကွက်လူကြီးများသည်တာဝန်အရမို့အိမ်ထဲသို့ပြန်ရှာကြပါတော့သည်။ “ ဆရာ…မတွေ့ဘူး ဆရာ… ” ထိုအချိန်တွင်တော့ ညိုမလည်း ခလေးကိုချီ၍ အောက်ထပ်သို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ အေးမရော၊ ညိုမပါ မျက်လုံးကလေး အပြူးသား၊ ခလေးသည်လည်း မငိုအသံတိတ်နေပါသည်။ ထို့နောက် ရဲသားကြီးက အေးမတို့ ဘက်လှည့်၍ တခုခုပြောမည်ပြုပြီးမှမပြောတော့ဘဲ ရပ်ကွက်လူကြီးများဖြင့်သာ ပြန်ကြရန်အချက်ပြလိုက်ပါသည်။ အေးမနောက်မှနေ၍ ခြံတံခါး လိုက်ပိတ်လိုက်ပါသည်။ ဦးဖိုးမောင်ပြန်လာချိန်တွင်လည်း အေးမမှနေ၍ ဒေါ်လှလွန်းသူပြောထားသည့်အတိုင်းပင်ပြန်ပြောပြပေး လိုက်ပါသည်။ အရင်ကညဘက်ဆိုလျှင် ကိုရီးယားကားသံ ကြားရတတ်သော်လည်း ယနေ့မူ အပေါ်ထပ်မှ ခလေးငိုသံကိုသာ ကြားရပြီး အောက်ထပ်တွင်တော့တိတ်ဆိတ်လျက်။ ဦးဖိုးမောင်သည်လည်း ညဘက်တွင် အေးမအား အကွက်ဆန်းဖြင့် ကြမ်းမည်ဟု ရည်ရွယ်ထားသဖြင့် လုပ်စရာအလုပ်များကိုအစောပိုင်းအချိန်တွင်အားသွန်ကြိုးစား လုပ်နေပါသည်။ ညိုမကတော့ခလေးနှင့်နပန်းလုံး လျက်။ အေးမကတော့ထုံးစံအတိုင်း ညဘက်အိပ်ရေးပျက်နေကျမို့အခုအချိန်တွင်အိပ်စက်နေပါသည်။ အချိန်မှန်စွာပင် ဦးဖိုးမောင်သည် အောက်ထပ်ရှိ အေးမအခန်းသို့ ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် အိပ်မောကျနေသော အေးမ၏ နောက်ကျောဘက်တွင်ဝင်လှဲနေလိုက်ပြီး အေးမ၏တင်ပါးကို သူလက်ဝါးများဖြင့် ပွတ်သပ်လိုက်ပါသည်။
သူပွတ်သပ်နေချိန်တွင်ပင် အေးမသည် အိပ်နေရာမှ နိုးလာပြီဖြစ်သည်။ အနောက်တွင် ဦးဖိုးမောင်ရောက်နေသည်ကိုလည်း သိပြီးဖြစ်သဖြင့်လွုပ်ရှားမွုမပြုဘဲ ဆက်နေလိုက်ပါသည်။ ဦးဖိုးမောင်သည်အေးမ၏တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုပွတ်နေရာမှသူ့လက်ချောင်းများသည်အေးမအဖုတ်အတွင်းသို့ ထိုးဝင်လာပါသည်။အေးမသည်မူရင်းအတိုင်းအဝတ်အစားများဝတ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဦးဖိုးမောင်တယောက် အဖုံးအကာ တခုခုကိုမျှ ဖြတ်ကျော်ခြင်း မပြုလိုက်ရပေ။ ဦးဖိုးမောင်၏ လက်ချောင်းများ အစွမ်းပကားကြောင့် အေးမနွုတ်ခမ်းလေးကိုက်ကာ နာကျင်မွုနှင့် ကာမ အရသာကိုကြိတ်ခံစားနေပါသည်။ ဦးဖိုးမောင်၏ လက်ချောင်းများသည်အဖုတ်တစ်ခုတည်းသို့သွင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ တရွေ့ရွေ့ဖြင့်စအိုပေါက်ကိုပင်ထိုးသွင်းနေပါတော့သည်။ အခန်းအတွင်း မှောင်နေပါသည်၊ သို့သော်ဦးဖိုးမောင်က အခန်းတံခါးကို ဒီအတိုင်းဖွင့်ထားခဲ့ခြင်းကြောင့် အပြင်မှကြည့်နေသော ညိုမအဖို့ အမှောင်အမှောင်ထဲတွင် မြင်နေရပါသည်။ ညိုမအခန်းဝ အကွယ်နားလေးတွင် သူမအဖုတ်ကိုသူမ လက်ဝါးဖြင့်ပွတ်ကာ သူမလည်း အံကြိတ်နေပါတော့သည်။ ဦးဖိုးမောင်သည် အေးမကို အချိန်အတော်ကြာ ထိုးဆွမွု လုပ်ပေးပြီးချိန်တွင်တော့ ထ၍ အခန်းမီးကို ဖွင့်လိုက်ပါသည်။အရင်ကအခန်းမီးကိုမဖွင့်သော်လည်းအခုအခါတွင်တော့အိမ်တွင်သူ့မိန်းမဒေါ်လှလွန်းသူလည်း မရှိသည်မို့ လွတ်လပ်စွာကဲရန်အခန်းမီးကို ဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်မီးပွင့်၍ လင်းသွားချိန်တွင်တော့ ကိုယ့် လက်ဖြင့်ကိုယ်အရှိန်တက်နေသော ညိုမကိုဦးဖိုးမောင်သည်ထင်းလင်းမြင်သာစွာ တွေ့လိုက်ရပါသည်။ ဦးဖိုးမောင်သည်ညိုမအနားသို့တိုးသွားလိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်တော့ညိုမအသိပြန်ဝင်လာပြီဖြစ်သဖြင့် ထပြေးရန်ပင် ပြင်လိုက်ပါသည်။ သို့သော်ထမပြေးဖြစ်ခဲ့ပါ။
ဦးဖိုးမောင်သည်လည်း ညိုမ၏အပြုအမူကို သဘော ပေါက်ကာ ဝတ်ထားသောပုဆိုးကိုလျှောချလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက်ညိုမလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါသည်။ လျော့ကျ နေပြီးသားဖြစ်သောညိုမ၏ထဘီသည်ယခင်နေရာတွင်ကွင်းလုံးကျွတ်ကျသွားပါသည်။ ဦးဖိုးမောင်သည်ညိုမအား ကျောခိုင်းအနေအထားပြု၍ အနောက်မှမတ်တပ်ရပ်လျက်ဖြင့်ပင်အခန်းဝတွင်စတင်ထိုးသွင်းပါတော့သည်။ “ အု…အ….အု…အဟင့်… ” “ အ…အ…အ…အ… ” ဦးဖိုးမောင်၏ အဆက်မပြတ်ထိုးသွင်းမွုများကြောင့် ညိုမလည်း ‘တအအ’ အသံထွက်၍ သူမတောင်းတ နေသော အရသာကိုခံစားရရှိလိုက်ပါသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအနောက်မှနေ့၍ အေးမမျက်လုံးအဝိုင်းသားလေး နှင့်ကြည့်နေပါသည်။ ဦးဖိုးမောင် တချီပြီးသွားချိန်တွင်တော့ ညိုမလည်း တော်တော် ပြီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဦးဖိုးမောင်သည် သူ၏ထုံးစံအတိုင်း အပြင်မှာပင် ပြီးလိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ညိုမ၏ဖင်တွင် လရည်များဖြင့် အလှဆင်ပြီးသား ဖြစ်နေပါသည်။ ဦးဖိုးမောင်ရော ညိုမပါ ညောင်းသွားပြီဖြစ်သဖြင့်အခန်းဝမှ အခန်းတွင်းသို့ဝင်၍ အေးမအနားတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ကြပါသည်။ သို့သော်ညိုမ ထိုင်မည်ပြုစဉ်တွင်ဦးဖိုးမောင်မှ….. “ ညိုမ မထိုင်ချလိုက်နဲ့အုန်း” အေးမကိုလှမ်းဆွဲခေါ်လိုက်၍ ညိုမဖင်အောက်သို့ဝင်၍ လဲစေလိုက်ပါသည်။ “ အေးမ…ညိုမဖင်မှာ ပေနေတာတွေကိုယက်ပေးလိုက်စမ်း” အေးမလည်း ခိုင်းသည့်အတိုင်းပင်ညိုမဖင်အောက်ဝင်၍ ညိုမဖင်တွင်ပေကျံနေသော ဦးဖိုးမောင်၏ လရည် များကိုလျှာဖြင့်ယက်၍ သန့်စင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ထို့သို့သန့်စင်သွားသည့်တိုင်အောင်အေးမကိုညိုမဖင်အောက်မှ ဦးဖိုးမောင်မှမထွက်ခိုင်းသေးဘဲ ညိုမအား ထိုင်ချခိုင်းထားပါသည်။ အေးမ နှာခေါင်းပေါက်နှင့်ညိုမ၏စအိုပေါက်တို့ တသားတည်း ဖြစ်နေသဖြင့် စအိုမှလာသမျှ အနံ့များကို အေးမခံစားနေရပါသည်။ တက်ဖိထားသဖြင့် အသက်ရွူ မဝသည့်ဒဏ်ကိုလည်း ခံစားနေရပါသေးသည်။ သို့သော်အေးမ မငြင်းနိုင်ပါ။ နှစ်ယောက်စလုံး အမောပြေသွားပြီမို့ ဦးဖိုးမောင်သည်ညိုမအား နောက်တချီဆွဲရန်ပြင်လိုက်ပါသည်။ ဒီ တခါတွင်တော့ ညိုမအား လေးဘက်ထောက်စေ၍ သူကအနောက်မှ နေရာယူလိုက်ပါသည်။ ကံမကောင်းရှာသူ အေးမလေးကတော့ညိုမ၏အောက်တွင်အဖုတ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလျက်လှဲနေရပါသည်။
ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ဦးဖိုး မောင်၏ အသွင်းအထုတ်မှန်သမျှကို အေးမသည်မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နေရပြီး နှစ်ယောက်ကြားမှထွက်လာသော အရည်တို့သည်လည်း အေးမမျက်နှာပေါ်သို့ကျလာဖို့ရာ အလားအလာ များစွာရှိနေပါသည်။ ညိုမအဖုတ်ကိုယက်ပေးလိုက်စမ်း ” ဦးဖိုးမောင်သည်ညိုမအဖုတ်ကိုလုပ်နေရင်းကပင်အေးမအားညိုမအဖုတ်ကိုယက်ပေးစေပါသည်။ အဖုတ် ထဲမှ အရည်များကို လျှာပြားဖြင့်ယက်ကာ အမိန့်အတိုင်းအေးမ ‘ပလပ်…ပလပ်…’ ဖြင့် ယက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ကျွတ်ထွက်လာသော ညိုမအမွေးများနှင့်ဦးဖိုးမောင်၏အမွေးများသည်လည်း အေးမ၏ပါးစပ်အတွင်းသို့ပင်ဝင်ကုန် ပြီဖြစ်သည်။ အဆုံးသတ်တွင်တော့ ဦးဖိုးမောင်သည်ညိုမအဖုတ်အတွင်းမှ သူ၏လိင်တံကိုထုတ်၍ အေးမပါးစပ် ပေါက်ထဲတွင်ပြီးထည့်လိုက်ပါသည်။ ညိုမ၏အရည်များကိုတော့ အေးမကယက်ပေးခြင်းဖြင့်ပင် သန့်စင်စေခဲ့ပါတော့သည်။ ထိုညတွင်တော့ သုံးယောက်စလုံး အေးမအခန်းထဲတွင်ပင် အိမ်စက်လိုက်ကြပါသည်။ အေးမထိုညက အလိုးမခံရသော်လည်း လရည်နှင့်အဖုတ်ရည်များကိုတော့ သောက်သုံးလိုက်ရပါသည်။ မျက်နှာသစ်ခွင့်လည်း မပေးသည်မို့ တညလုံး ထို အနံ့များ၊ အညစ်အကြေးများဖြင့်ပင်အေးမ အိပ်စက်ခဲ့ရပါသည်။ ညိုမကတော့သူမလိုချင်တာကိုရသဖြင့် ကြည်နူး ဝမ်းသာလျက်။ သိပ်မကြာလိုက်သော ရက်ပိုင်းလေး အတွင်းတွင်ပင် ဒေါ်လှလွန်းသူအား လိမ်လည်မွု၊ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မွုများဖြင့်ရဲကဖမ်းဆီး အရေးယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုရဲစခန်းက ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားသောကြောင့် အေးမတို့သိလိုက်ကြရပါသည်။ နှစ်နှစ်ခန့်ကြာသောအခါ…….. အခုအချိန်တွင်တော့ အရာရာအားလုံးသည်ပြောင်းလဲမွုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီဖြစ်သည်။ ထောင်ကျသွားသော ဒေါ်လှလွန်းသူသည် ကျန်းမာရေး အခြေအနေများကြောင့် ထောင်ထဲတွင်ပင် အသက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အပြင်မှာတုန်းကတော့ လွုပ်လွုပ်ရှားရှားနှင့်မို့မသိသာသော်လည်း ထောင်ကျသွားချိန်တွင်တော့စိတ်ဓာတ်ကျဆင်း ပြီး အစာအစားများကို ဟိုရှောင်ဒီရှောင် စားသောက်ခြင်းကြောင့် ရောဂါများအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လာပြီး သေသည့်အထိဖြစ်သွားခဲ့ရပါတော့သည်။ ဦးဖိုးမောင်ကတော့ ဒေါ်လှလွန်းသူသေပြီး သိပ်မကြာခင်လေးတွင်ပင်ညိုမအား တရားဝင်လက်ထပ်ယူ လိုက်ပါသည်။
ဦးဖိုးမောင်နှင့်ဒေါ်လှလွန်းသူမွေးထားသော ခလေး၏အမေနေရာတွင်ပင်ညိုမနာမည်ကိုပြောင်းလဲ ထားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ “ အ…အ…အ…. ” အေးမသည်ကုတင်ပေါ်တွင်ပေါင်ကိုကား၍ ပက်လက်လှဲနေလျက်အေးမ၏ကားထားသော ပေါင်ကြား နေရာတွင်တော့ ဖြိုးဝေက ဒူးထောက်ကာ နေရာယူထား၍ အေးမ၏အဖုတ်အတွင်းသို့ သူ၏လိင်တံအားထိုးသွင်း ပေးနေရပါသည်။ ဖြိုးဝေအနည်းငယ် ကြမ်းမိသွားပါက အေးမမှ ဖြိုးဝေ၏ပေါင်ကို လက်သည်းဖြင့် ကုတ်သဖြင့် ဖြိုးဝေ၏ပေါင်တွင်အနီးစင်းကြောင်းများဖြင့်ပြည့်နေပါသည်။ ဦးဖိုးမောင်နှင့် ညိုမ၏ကျေးဇူးတို့ကြောင့် အေးမသည်သူမမနေချင်သောနေရာမှ လွတ်မြောက်၍ သာယာ သော ဘဝတစ်ခုကို ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဖြိုးဝေ အေးမတို့အိမ်သို့ နောက်တစ်ခေါက်ရောက်လာချိန်တွင် ညိုမ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဖြိုးဝေကိုအေးမဖြင့်လက်ထပ်စေလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက်ဖြိုးဝေအား ဦးဖိုးမောင်၏လုပ်ငန်းတွင်ပင် အလုပ်လုပ်ရန်နေရာပေးလိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်ဦးဖိုးမောင်နှင့်ညိုမတို့သည်လက်ထပ်ပြီးနေပြီဖြစ်သည်။ အခုအချိန်တွင်တော့ အေးမသည် ဖြိုးဝေ၏ ငွေရှာဖွေတော်မွု ဦးဖိုးမောင်နှင့်ညိုမတို့၏ကျေးဇူးတော်တို့ ကြောင့် ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းလေးတွင် ကျွန်တယောက်လိုဖြစ်နေသော လင်တော်မောင်ဖြိုးဝေ၏ ခစားပေးမွုတို့ကို ခံစားကာ သာယာချောမွေ့သော ဘဝလေးတစ်ခုကိုရရှိခံစားနေရပြီဖြစ်သည် ……… ပြီးပါပြီ။